Posted by KO at 4:14 PM No comments:
ကျနော် နှင့် ကျန်းမာရေး အာမခံ အတွေ့အကြုံ အချို့
အခုတလော စင်္ကာပူမြန်မာသတင်းရပ်ကွက်မှာ အထူးသတင်းကြီးသွားတဲ့ ဦးနှောက်အကျိတ်ကြောင့်ခွဲစိတ် ကုသမှုစားရိတ်အတွက် စင်္ကာပူဒေါ်လာသိန်းကျော်ကုန်ကျမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်နဲ့ လှူဒါန်းကြ မျှဝေပေးကြ၊ ဈေးရောင်းပေးကြနဲ့ အတော်လေးဗျာများ သွားကြပါ တယ်။ ပါဝင်လှူဒါန်းကြ လှုံဆော်ပေးကြတဲ့ သူများ ကို မုဒိတာပွားရပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံရောင်းချတဲ့သူ မဟုတ်သော်လည်း အလုပ်ရဲ့သဘောသဘာဝအရ ဝန်ထမ်းများ အလုပ်သမားများအတွက် အစိုးရက မဖြစ်မနေပြုလုပ်ပေးရမည် လို့ ဖော်ပြထားတဲ့ အာမခံ များအပြင် ဝန်ထမ်းများအတွက် အထူးအခွင့်အရေး တစ်ခုအနေနဲ့ ကုပ္မဏီများကနေ အပိုဆောင်း ဝယ်ယူ ထောက်ပံပေးတဲ့ အာမခံများအတွက် ဒီ အာမခံတွေနဲ့ တနည်းမဟုတ်တနည်း ပတ်သတ်လာရပြီးနားလည် သဘောပေါက်အောင်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
ခုနကပြောခဲ့တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးကိစ္စအကြောင်းပြုပြီး စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွင်း ရှိ အခြား မြန်မာနိုင်ငံသား များ သိရှိဖို့အတွက် ရယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ အခြားသော ဝန်ထမ်းရေးရာ ပရော်ဖစ်ရှင်နယ် (HR Professional) များလဲ အတွေ့အကြုံရအောင်၊ ကျနော့်ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံလေးတွေ နဲ့ မှီငြမ်းပြီး မိမိသိထားတာလေးတွေ ဝေမျှဖို့အတွက် ဒီ ပိုစ့်ကို ရေးဖြစ်ပါသည်။ အာမခံ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ အတွက်တော့ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း ကျနော်က အာမခံရောင်းချသူ Professional မဟုတ်တဲ့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ နီးစပ်ရာ အာမခံကိုယ်စားလှယ်များ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းစေလိုပါတယ်။
စင်္ကာပူ company တစ်ခုကနေ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမား သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်း၊ Work Permit Holderနဲ့ S pass Holder များခန့်ထားတော့မယ် ဆိုတာနဲ့ ဒီအလုပ်သမား၊ ဝန်ထမ်းများအတွက် Company ဖက်က နေ Ministry of Manpower (MOM) စင်္ကာပူအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ညွန်ကြားချက်အတိုင်း ကျန်းမာရေးအာမခံ ပေါ်လစီတစ်ခုကို ဝယ်ယူပြဌာန်းပေးရတယ်။ ဒီအာမခံပေါ်လစီက အခြေခံအဆင့် ပေါ်လစီတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ အထိ အာမခံဖက်ကနေပေးလျှော်မယ့် အဆင့်ပါ။
ဒီအခြေခံပေါ်လစီဟာ Company ရဲ့ WP နဲ့ Spass အားလုံးကိုအကျူံးဝင်ပြီးတော့ EP အတွက်အကာ အကွယ် မပေးပါဖူး။ ဒီပေါ်လစီအတွက် ပရီမီယံကြေးအနေနဲ့ အာမခံ company နဲ့ ဝန်ထမ်းအင်အား ပေါ်မူတည်ပြီး တစ်နှစ်ကို ဝန် ထမ်းတစ်ယောက်အတွက် ၅၀ ကနေ ၁၀၀ အတွင်းပေးရပါတယ်။ ဒီပေါ်လစီဟာ Hospitalization & Surgical ပဲဖြစ်တဲ့အတွက် ဝန်ထမ်း ဆေးရုံတက်ကုသမှ သာလျှင် အာမခံကလျှော်ကြေးစပေးမှာဖြစ်ပြီး၊ ပဏာမရောဂါရှာဖွေရေးအတွက် ဓာတ်ခွဲခန်း၊ စကမ် စသည်ဖြင့် နဲ့ အထူးကု၊ သာမန်ကုဆရာဝန်များအတွက် ကုသစားရိတ် တွေကိုပါထည့်သွင်း ပြီးလျှော်ကြေးတောင်း ခံနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က စင်္ကာပူရဲ့ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ ရောဂါရှာဖွေ စမ်းသပ်ပြီး တဲ့နောက် ဘာရောဂါမှရှာမတွေ့ သော်လည်းကောင်း၊ ဆေးရုံတက်ကုသ စရာမလိုရင် လည်းကောင်း ဒီပေါ်လစီအတွင်းမှာ မပါဝင်ပဲ လျော်ကြေးငွေတောင်းခံလို့မရနိုင်ပါဘူး။
ရောဂါအခြေအနေက ဆေးရုံတက်ကုသရမယ့် အခြေအနေ ရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ အခြေခံအားဖြင့် ခုတင် (၄) လုံးဝင် အခန်းအဆင့်မှာပဲ တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ လိုအပ်ချက်အရ သီးသန့်အခန်း သို့မဟုတ် အထူးကြပ်မတ်ကုသခန်းထဲ ကို လဲ ထည့်သွင်းကုသဖို့အတွက် ဆေးရုံကနေပဲ စီစဉ် ဆုံးဖြတ်တာဖြစ် ပါတယ်။ ဆေးရုံတွေရဲ့ procedure အရ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဆေးရုံတက်ကုသဖို့ လိုအပ်ပြီဟေ့ ဆိုတာနဲ့ ဆေးရုံကနေ ဝန်ထမ်း အလုပ်လုပ်နေတဲ့ company ကိုလှန်းအကြောင်းကြားပြီး လူနာကို ဆေးရုံတင် မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးရုံကုန်ကျစားရိတ် အတွက် company ဖက်က ငွေပေးခြေမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကို Letter of guarantee ပေးပို့ပြီး အတည်ပြုချက် ရ ယူပါတယ်။ အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ တော့ Company ဖက်ကနေ တာဝန်မယူနိုင်ပါ ဆေးရုံမတက်နဲ့ ပြန်လာပါလို့လဲ ပြောလို့မရတော့ပါဖူး။ အဲ့လိုပြောရင် လူနာရဲ့ အသက်အန္တရယ် နီးစပ်တဲ့အတွက် မဖြစ်မနေ တင်ရပါမယ်ဆိုပြီး၊ Company တွေပေါ် မှာ အာဏာသက်ရောက် နိုင်တဲ့ ဝန်ကြီးဌာန MOM ကိုအကြောင်းကြားပြီး MOM ရဲ့ အာဏာနဲ့ Company ကို ဖိအားပေးခိုင်းမှာပါ။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားသား ဆေးကုသမှုစားရိတ် ဟာကြီးမားလှတဲ့အတွက် သာမန် အူယောင်ငန်းဖျားလို၊ သွေးလွန်တုတ်ကွေး လို ရောဂါမျိုးများအတွက် (၅) ရက်တာ သာမန်အခန်း တွင်းကုသစားရိတ်၊ ဆရာဝန်၊ ဆေး ဘာညာစာရိတ်တွေဟာ ငွေ ၅၀၀၀ ကနေ ၆၀၀၀ ကြားကျသင့် ပြီး၊ ICU အထူးကြပ်မတ်ကုသခန်း ထဲများ ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ (၅) ရက်အတွက် ပေါ်လစီ အကာအကွယ် ပေးထားတဲ့ ငွေ ၁၅၀၀၀ ဆိုတာ ICU ခန်းသုံးခလောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။
၁၅၀၀၀ ထဲ့ကျော်လွန်သည်အထိ ကုသခဲ့တဲ့ လူနာ၊ အခြေအနေအလွန်ဆိုးရိမ်ရတဲ့ အတွက် ခွဲစိတ်ကုသရ တဲ့ လူနာမျိုး၊ ကင်ဆာအတွက် ဓာတ်ကင်ကုသရတဲ့ အခြေအနေ မျိုးတွေ ရောက်လာခဲ့အခါ ဘယ်သူက ကျန်တဲ့ဆေးကုသစားရိတ်ကို အကုန်ကျခံရမှာလဲ။ အဲ့ဒီအတွက် အဖြေက သာမန်ကျနော်တို့ နေစဉ် ထိတွေ့နေတဲ့ Employment Act ထဲမှာ မရှိတော့ပဲ သူ့ထက် ပိုမိုခြုံငုံထားတဲ့ Employment of Foreign Manpower Act လို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများ ခန့်ထားရေးဥပဒေ ထဲက ဖေါ်ပြချက်အရ ဝန်ထမ်း ကိုခန့်ထားတဲ့ Company ကနေ ဒီဝန်ထမ်းရဲ့ ဆေးကုသမှုကုန်ကျစားရိတ် အားလုံး၊ အာမခံ ကပေးထားတဲ့ ၁၅၀၀၀ ထက်ပိုသော မည်သည့်ပမာဏ ကိုမဆို ကုန်ကျ ခံရမည် ဆိုပြီးပြဌာန်း ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အဲ့တော့ Company တွေဖက်ကနေ ဒီလိုမျိုး မမျှော်လင့်ထားသော၊ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှ ခြင်းများ ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် WP အလုပ်သမားများအတွက် ခုနက အခြေခံပေါ်လစီ ၁၅၀၀၀ ကနေ ၃၀၀၀၀ အထိ တိုးမြင့်အာမခံဖို့ လုပ်ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒါအပြင်ကို Company တွေရဲ့ သုံးစွဲနိုင်မှုအသုံးစားရိတ်တွေ ပေါ်မူတည်ပြီး Pre-Employment Full Medical Check Up လို့ခေါ်တဲ့ အလုပ်မခန့်ထားမီ ဆေးစစ်ချက် တွေ၊ Annual Medical Check Up တွေပြုလုပ်ကာကွယ်ရပါတယ်။ S Pass အတွက် ငွေ ၃၀၀၀၀ အထိ အပို ထပ်ဆောင်းအာမခံလို့ရတဲ့အပြင် အခြားသီးသန့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံ များ ကို ငွေ တက်နိုင်ရင် တက်နိုင်လောက်ထပ်မံ အာမခံထားလို့ရပါတယ်။ ကုန်ကျစားရိတ်အားလုံးရဲ့ ၉၀% အထိ ပြန်ပေးမယ့် ပေါ်လစီ၊ ၁၀၀% အထိပြန်ပေးမယ့် ပေါ်လစီများ အတွက် အသက်အပိုင်းအခြားပေါ်မူတည် ပြီး တစ်နှစ်အတွက် ၃၀၀ ကနေ ၈၀၀ လောက်အထိ အာမခံ ပရီမီယံကြေးကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဒီအာမခံခံ အတွက် ဘယ်ဟာတွေ ကိုကာဗာဖြစ်သလဲ၊ ဆေးရုံစားရိတ် အတွက် ကိုယ်ဖက်ကငွေဘယ်လောက်ပေးပြီး ပိုတာ ကိုမှာ အာမခံကပေးမှာလား၊ ဘယ်ဆေးရုံအဆင့်တွေနဲ့ ဘယ်အခန်းအဆင့် တွေ ကို တက်ရောက် ကုသမှုခံနိုင်မလဲ၊ အာမမခံတဲ့ ရောဂါတွေ ရှိသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကိုယ် အာမခံ အရောင်း ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါ သေသေချာချာ မေးစေလိုပါတယ်။
အခြား အာမခံတစ်ခုအနေနဲ့ Company တွေဖက်က မဖြစ်မနေ အာမခံရတဲ့ အာမခံကတော့ Workmen Compensation လို့ခေါ်တဲ့ အလုပ်ခွင်အတွင်း အလုပ်သမား ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိ၊ သေဆုံးမှုအတွက် အာမခံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအာမခံကိုတော့ MOM က Workmen compensation Act ပြဌာန်းချက်တွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ကိုယ်တွယ်ပြီးတော့ ပြင်ပ အာမခံ Company ကြီးတွေကနေ Company တွေကို အာမခံရောင်းပါ တယ်။ ဒီအာမခံကြေးအတွက် Company ကနေပဲ ပေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ အလုပ်သမားစီကနေ တပြားမှ တောင်းခံခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒီအာမခံအတွက်ကတော့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုအတွက် (၃) ရက်ထပ်ပိုသော ဆေးခွင့်ကို စင်္ကာပူဆေးရုံဆေးခန်း တစ်ခုခုကများ ပေးခဲ့ရင် MOM ကို (၁၄) ရက်အတွင်း အကြောင်းကြားပြီး လိုအပ်သည်များ ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။
ကျနော့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမှာ ခုနကပြောခဲ့တဲ့ အာမခံတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မှတ်မှတ်ရရ အဖြစ်အပျက် (၂) ခုကြုံခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပထမ case ကတော့ မြန်မာ အလုပ်သမားပါ။ ဗိုက်အရမ်းနာတဲ့အတွက် ညဖက်က ဆေးရုံကို တင်လိုက်ရတဲ့အကြောင်း မနက်မိုးလင်းလင်းချင်း ဖုံး msg တွေ့တော့ ဆေးရုံးက အိမ်နဲ့ နီးတဲ့ NUH မှာဆိုတော့ ချက်ချင်းသွားတွေ့ဖြစ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း ခေါင်းကနေခြေအဆုံး ရောဂါတွေရှာဖွေထား ပြီးတော့ ရလဒ်များကို စောင့်နေသည်ပေါ့။ နေ့လည်ရောက်တော့ ဆေးရုံးကနေဖုံးဆက်တယ်၊ ပဏာမ သွေးစစ်ချက်တွေ အရ ကင်ဆာလက္ခဏာ ပြနေသည့်အတွက် စကမ်ဖတ်ချင်သည်၊ ကုန်ကျစားရိတ် မည်မျှရှိသည် လုပ်ရမလား လို့ ခွင့်ပြုချက်တောင်းတော့ ဆေးရုံပေါ်ရောက်နေပြီ၊ ဆေးရုံတင်ထားပြီးပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက် အာမခံက ၁၅၀၀၀ အထိပြန်ရနိုင်တဲ့အတွက် ဆက်လုပ်ပါလို့ ခွင့်ပြုချက်ပေးလိုက်သည်။
လူနာရဲ့ အခြေအနေ က ပြန်ကောင်းလာပြီး အသက်အန္တရယ်နဲ့ လဲဝေးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် နည်းနည်း စိတ်အေးသွားပေမယ့် စကမ် ဖတ်တဲ့ ရလဒ်ရတော့ နည်းနည်းတော့ ပြသနာကြီးလာပြီ၊ စကမ်ကနေ တွေ့တာ အူမကြီးထဲမှာ ကင်ဆာအလုံးတွေ တွေ့သည်ပေါ့။ ထပ်သေခြာအောင် အသားစယူရပါ မည်ဆိုတော့ ဟင့်အင်း မယူနဲ့ ပြောလို့မှမရတာ ယူရမှာပေါ့။ လူနာကတော့ ဆေးရုံကဆင်းလာပြီး အဆောင်မှာ ပဲ နားနေခိုင်းထားပြီး (၃) ရက်လောက်ကြာတော့ ဆေးရုံကနေ အသားစရလဒ် အတွက် Company မှာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကိုယ်တိုင် လိုက်လာပါဆိုတော့ ကျနော် သိလိုက်ပြီ အခြေအနေ သိပ်မကောင်းဆိုတာ၊ ဒါမယ့် အဆိုးဆုံးကိုတော့ ကျနော်မမျှော်လင့်ထားမိပါဖူး။
အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ကိုယ်တင် စကမ် နဲ့ အသားစ ဓာတ်ခွဲရလဒ်တွေကို ပြောပြတော့ ကင်ဆာရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့် နဲ့ နောက်ထပ် (၆) လအထိ အသက်ရှင်ဖို့ခန့်မှန်းပါသည်တဲ့၊ လူနာက သိခွင့်ရှိပေမယ့် ခံစားနိုင်ပါ့မလား၊ မင်းဘာသာပြန်ပြီး ပြောပါဆိုတော့ အသက် (၃၄) နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ ကျနော့် မြန်မာ အလုပ်သမား ကို " မင်း ကင်ဆာနောက်ဆုံးအဆင့်နဲ့ ၆ လပဲ အသက် ရှင်တော့မယ် " လို့ ကျနော် ပြောမထွက်ပါဖူး။ တစ်ခုခုတော့ ပြောရမယ် ဆိုတော့ " မင်းမှာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နေတယ်၊ အခြေအနေ အရတော့ ဆရာဝန်က ခွဲစိတ်ကုသဖို့ အားမပေးဖူး၊ ဓာတ်ကင်ကုသနည်းနဲ့ပဲ ကုသပါမယ်၊ ဒီမှာကုသလို စိတ်ရှိလား၊ မြန်မာပြည်ပြန် ကုသမလား " လို့ ကျနော်ပြောပြ ပြီးမေးမြန်းတယ်ပေါ့။ သူက မြန်မာပြည်မှာပဲ ပြန်ပြီး ကုချင်ပါတယ် ဆိုတော့ ဆရာဝန်ကြီးကနေ လွှဲစာ၊ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေ၊ စကမ် နဲ့ အသားစ ရလဒ်တွေ အကုန်လုံးကို ထုတ်ပေးဖို့ ဆရာမကို ညွှန်ကြားပေးပါတယ်။
ရန်ကုန်ကို အမြန်ပြန်ဖို့ ချက်ချင်းစီစဉ်ပေး၊ လေဆိပ်အထိလိုက်ပို့တော့ သူ့ခမျာ ကျနော့်ကို ရောဂါ ပျောက်ရင် ပြန်လာပါရစေနော်လို့ တဖွဖွ ပြောရှာတယ်။ ကျနော့်မှာ တော့ မုသားမပါလင်္ကာ မချော ဆိုတဲ့အတိုင်း ပြန်လာပါပေါ့။ တော်တဲ့ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ အလုပ်သမား မို့လို့ ရုံးဝန်ထမ်းတွေ စီကနေ မြန်မာပြည်ပြန်ရင် ဆေးကုသစားရိတ် အတွက်ဆိုပြီး ငွေ ၄၀၀၀ နီးပါးရပါတယ်။ ရန်ကုန်ရောက်တော့ လဲ အဆက်အသွယ် သိပ်မပျက်ပဲ သူခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်မယ် ဆိုပြီး မြန်မာဆရာဝန်ကြီးများက အူမကြီးထဲမှာ ရှိတဲ့ ကင်ဆာအလုံးများ ကို ခွဲထုတ်ပါသော်လည်း၊ ခွဲစိတ်ပြီး ၃ လောက်အကြာမှာ သူ့အမျိုးသမီး က နေတဆင့် ဆုံးပါးကြောင်း သတင်းရောက်ပါတယ်။ အတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်ရလိုက်ရတယ်။
ဒုတိယ case ကတော့ ဘင်္ဂလာနိုင်ငံသား အသက် ၅၀ အရွယ် company မှာ (၁၀) နှစ်ကြာအမှုထမ်း နေတဲ့ အလွန်တော်တဲ့ ဆေးသုတ်သမား ပါ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ရင်ဖက်အောင့်တယ် ဆိုပြီး အော့အန်တော့ အလုပ်သမားခေါင်းတစ်ယောက်နဲ့ အတူ ဆေးရုံကို တက်စီနဲ့ တင်လိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ရုံးကို သတင်းရောက်တဲ့ အခါ ကျနော်တို့ ရုံး ကျနော့် HR practice အရ ကျနော် သို့မဟုတ် ကျနော့် လက်ထောက် ဆေးရုံကို လိုက်ရပါတယ်။ အဲ့ဒီတုံးကလဲ ကျနော်ပဲ Yishun က Khoo Teck Puat ကို လိုက်ပါတယ်။ A& E ကိုမေးလိုက်တော့ ICU ထဲမှာရောက်နေပါပြီ ဆိုတော့ ကျနော့်မှာ ဆေးရုံ Bill ကိုတွေးမိပြီး နည်းနည်းတော့ သွေးတိုးသွားတော့တယ်။ ICU ထဲရောက်တော့ ကျနော့်စိတ်ထဲမှာ မျှော်လင့်ထားတာက ပိုက်တွေတန်းလန်းနဲ့ မေ့မြောနေလိမ့်မယ်ပေါ့။ အလွန်သန်မာ တဲ့ အလုပ်သမားပါပဲ၊ ပိုက်တွေတန်းလန်း၊ အောက်စီဂျင် ပိုက်တက်ရက်နဲ့ Hi Sir, Thank you for coming ဆိုပြီး၊ သူ့ကို ဆေးကုခွင့်ပေးဖို့ မျက်ရည်ကျပြီး ပြောတော့တာပါပဲ။ Heart Attack ရကြောင်း အခြေအနေ ကို ထိမ်းသိမ်း ထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဆရာမကရှင်းပြထားတော့ ကျနော်သူဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိနေနှင့် ပြီးတော့ စိတ်ချပါ၊ ဆေးရုံ ကုန်ကျစားရိတ်အတွက် ဘာမှစိတ်မပူနဲ့ စိတ်အေးအေးသာနေပါဆိုတော့ ကျေးဇူးတင် တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တာ အထပ်ထပ်အခါခါ၊
Company ဖက်ကတော့ ပေးချင်သည်ဖြစ် စေ မပေးချင်သည် ဖြစ်စေပေးရမှာပါပဲ။ ဒါမယ့် ပရိယယ်ကြောင့် မပြောဖူးပေါ့။ ကံကောင်းစွာနဲ့ နှလုံးသွေးကြောထဲ ပူဖေါင်းထည့်ကုသနည်းများနဲ့ အမြန်ကုသချက်ကြောင့် အသက်ချမ်းသာပြီး ICU ထဲမှာလဲ (၃) ရက်ပဲနေလိုက်ရပါတယ်။ ရုံးကို Bill ရောက်လာတော့ ကုန်ကျငွေ ၂၁၀၀၀ နဲ့ နောက် ဆုံးစိတ်ချရသည်အထိ ဆေးကုသစားရိတ် ၁၀၀၀၀ လောက်အထိ Company ကနေ ကုန်ကျခံခဲ့ရပါတယ်။ အလုပ်သမား ဖက်ကတော့ သူ့ကို ငွေ ၁၅၀၀၀ ကျော်အပိုကုန်ကျ ခံခဲ့ပေးတဲ့ အတွက် ကျနော့်သူဌေးကို သူ့ ဘုရားသခင် အလားပါပဲ။ အခုချိန်ထိ အလုပ်လုပ်ဆဲဖြစ်ပြီး ကျေးဇူးဆပ်ချင် တဲ့ စိတ်ကြောင့် အလွန် အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ပါပဲ။
သူ့အတွက် အာမခံလျော်ကြေးငွေ ဆေးရုံတက်စားရိတ်ပြန်ရရှိဖို့ အာမခံ company ကိုတောင်းဆိုတဲ့ အခါကျတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အာမခံဖက် ကနေ တောင်းခံဖို့ ပြန်ပြော တော့ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အာမခံကလဲ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် မဟုတ်သဖြင့် မပေးနိုင်ပါဆိုပြီး ဘောလီဘောပုတ်တော့ MOM ရဲ့ အဆုံးအဖြတ် ခံရသည်အထိ ကျန့်ကြာခဲ့ရပါတယ်။ ဒေါ်လာသန်းချီ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Company များအတွက် ငွေလေး ၂၀၀၀၀ လောက်ကဘာမှမဖြစ်လောက်ပေမယ့် တစ်နှစ်မှာ ငွေ ၁ သိန်း ၂ သိန်းလောက်နဲ့လည်ပတ်တဲ့ လုပ်ငန်းငယ်လေးများသာ ဆိုရင် ငွေ ၂၀၀၀၀ ဟာ အတော်လေး ဒုက္ခရောက်စေနိုင်တဲ့ ပမာဏပါ။
ကျနော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Company အတွက် ဆေးကုသစားရိတ် ကုန်ကျငွေ သိန်းချီ နဲ့ အထိမနာရလေ အောင် တိကျတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပေါ်လစီတွေချမှတ် ထားခဲ့ပြီး၊ နှစ်စဉ် ရုံးဝန်ထမ်းအားလုံး နဲ့ အသက် ၄၀ နှင့် အထက်အလုပ်သမားများကို ကျန်းမာရေးစစ်ဆေး စေပါတယ်။ စင်္ကာပူအစိုးရ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ရဲ့ ပံပိုးကူညီမှုနဲ့ တစ်နှစ်တာပတ်လုံး ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း၊ ယောဂ စတဲ့ သင်တန်းတွေ ကို အခမဲ့သွားရောက်လေ့ကျင့်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးခြင်း၊ တစ်နှစ်မှာ (၄) ကြိမ် ကျန်းမာရေး အသိပညာဆိုင်ရာ Seminar များစီစဉ်ပေးခြင်းနဲ့ အခါအားလျော်စွာ အသီးအနှံစားသောနေ့၊ အသီးအနှံ ဖျော်ရည်သောက်သုံးသောနေ့များ အတွက် Company ရဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်၊ အစိုးရရဲ့ ထောက်ပံငွေတွေ နဲ့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအာမခံအတွက်လဲ Great Eastern အာမခံနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဝန်ထမ်းများအားလုံး အတွက် အာမခံပရီမီယံကြေး လျှော့ဈေးနဲ့ ရအောင် စီစဉ်ပေးထား ပါတယ်။ အလုပ်သမား အဆင့် မှာ အထူးကု ဆရာဝန် နဲ့ ဆေးရုံဖက်ကို ရိုးရိုးဆရာဝန်က လက်လွှဲကုသ စေလိုက်သည် ဆိုသည်နှင့် ဝန်ထမ်းရေးရေးရာ ဌာနမှ ဝန်းထမ်းတစ်ယောက်၊ စကားပြန်တစ်ယောက် ဆေးရုံကိုလိုက်ပြီး ကူညီဆောင်ရွက် စေခြင်းဖြင့် အလုပ်သမား ကို ကူညီအားပေးရာလဲ ရောက်၊ ရောဂါအခြေအနေ အတိမ်အနက် ပေါ်မူတည်ပြီး စင်္ကာပူတွင် ကုသသင့်မသင့် ကိုလဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သွားပါတယ်။
ကျနော့်စင်္ကာပူ က မိတ်ဆွေများ အတွက် အကြံပေးချင်တာကတော့ မိမိ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Company ရဲ့ ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေ၊ Employee Benefit လို့ခေါ်တဲ့ ဝန်ထမ်းအခွင့်အရေး အတွက်ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာ အထိစီစဉ်ပေးထားလဲ၊ သာမန် MOM ရဲ့ အခြေခံအာမခံပဲလား၊ ဒီထက်မကတဲ့ အာမခံတွေ ဝယ်ထားသလားဆိုတာ မိမိ HR ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ သာမန်အာမခံအဆင့် ပဲ ထားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ပိုင် အာမခံအတွက် တစ်နှစ်အတွက် ငွေ ၃၀၀ က နေ ၈၀၀ လောက်အထိ သုံးစွဲပြီး အာမခံဝယ်ယူထားဖို့အတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်သင့်ပါကြောင်း အကြံပေးရင်း ကျနော့်ပိုစ့် ကို နိဂုံး ချူပ်ပါရစေ။ အားလုံးပဲ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ ပါစေကြောင်းလဲ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ။
Posted by KO at 11:11 AM No comments:
ကျနော် နှင့် RHC Career Talk
ဒီ blog ပေါ်update မတင်၊ စာအသစ်မရေးမိတာ ၁ နှစ်ကျော်တောင်ကြာပါပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကလို့ daily life style တစ်ခုလုံးကို healthy life style အနေနဲ့ရော စလုံး တစ်တိုင်းပြည်လုံး အစိုးရကစလို့ အောက်ခြေအထိ ပြောနေကြတဲ့ work-life balance ပေါ်လစီကြီးကို အလွန်ထောက်ခံတာကြောင့် နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတွေ ကိုယ်တိုင်လဲ လုပ်၊ အစိုးရရဲ့ အထောက်အပံငွေတွေ သုံးပြီး company က ဝန်ထမ်းများအတွက်လဲ တစ်နှစ်ပါတ်လုံးအတွက် ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ်တွေ ချမှတ်နဲ့ HR project များစွာကို ကောင်အထည်ဖော် နေတာများသွားတာကြောင့် ဘာစာမှမရေးဖြစ်ခဲ့တော့ပါဖူး။ ဒီအကြောင်းအရာကတော့ ၂၀၁၆ ဖေဖဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ RHC Technologies မှာ စကား ပြောခဲ့တာလေးအတွက် Short note လေး ကိုယ့်မှတ်တမ်းလေးအနေနဲ့ ချရေးထားတာလေးပါ။
အဲ့ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၆ နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ ရန်ကုန်ကို ဘန်ကောက်ကတဆင့် ခရီးသွားဟန်လွဲလေး ဝင်သွားမယ် စိတ်ကူးမိတယ်။ ရန်ကုန်မှာလဲ ဒီတခါသွားတာ ဘာမှမယ်မယ်ရရ လုပ်စရာမရှိ တော့ ကိုစိုင်းလင်းသူ ဖွင့်ထားတဲ့ RHC ကိုသွားလည်မယ်လို့ စိတ်ကူးမိတော့ သူ့ကို Fb chat box ကနေ လာလည်ပါမယ်လို့ အကြောင်းကြားတော့ သူက မထင်မှတ်ပဲ သူ့ကျောင်းသား လေးတွေကို စကားပြောပေးပါတယ်။ ၁ နာရီအချိန်ပေးပါ့မယ်တဲ့။ ဘာပြောရမှာလဲ လို့ မေးတော့ HR နဲ့ပါတ်သက်တဲ့အကြောင်း၊ Motivation စိတ်ဓာတ်တက်ကြွ ဖို့ပြောတဲ့ အကြောင်းတဲ့။ ကျနော် က blog ပေါ်မှာသာစာရေးဖူးတာ၊ ဒီလို လက်ချာပုံစံ၊ Motivation talk ပုံစံတွေကို တခါမှမပြောဖူးတော့ အတွေ့အကြုံ ရအောင် ပြောလဲပြောချင်တယ်။ ကျနော့် အတွက် challenging တစ်ခုအနေနဲ့ ရယ်၊ အတွေ့အကြုံ ရယ်၊ နောက်ဆုံး တစ်ခုအနေနဲ့ စင်္ကာပူမှာ အမြဲတမ်းလိုလို contribution back to society လုပ်နေပေမယ့် ကိုယ့်မြန်မာပြည် အတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာ ကနေ contribution လုပ်တဲ့အနေနဲ့ ပြောမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး ဘာပြောမလဲ ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်တွေးတယ်။ ကိုစိုင်းလင်းသူ ကိုလဲ သူ့ သင်တန်းသားတွေက ဘယ်လိုလူမျိုး၊ အသက်စတာလေးတွေ မေးပြီးတော့ ပြောမယ့် topic ကို ရွေးထုတ်ရတာပေါ့။ သူ့နဲ့စကားပြောဖြစ်တဲ့နေ့က စင်္ကာပူကနေ ဘန်ကောက်ကို သွားဖို့ (၄) ရက်အလိုပေါ့။ ရုံးမှာလဲ ပိတ်ရက်တွေ နီးလာတာနဲ့ အမျှ ဖြတ်စရာလေးတွေ အတော်များများ ရှိနေတာလေ။ လုပ်စရာရှိတာလေးတွေ ခပ်မြန်မြန်ရှင်း စီစဉ်စရာ ရှိတာလေးတွေ စီစဉ်ပါတယ်။
သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများက ကျောင်းပြီးကာစလူငယ် တွေများပြီး၊ အလုပ်လုပ်ဖို့ တာဆူနေကြတဲ့ လူငယ်တွေဆိုတော့ အဲ့ဒါနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အကြောင်း အနေနဲ့ Career Life ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် အောက်က အကြောင်းအရာတွေ အတွက် ပြောမယ့်အကြောင်းအရာ အတွက် စာရေးတဲ့ပုံစံအတိုင်း ဖြစ်အောင် စာစီရေးချ၊ research လုပ်စရာတွေ အတွက် research လုပ်ပေါ့။ အဲ့ဒီအတွက် ရုံးတက်ဖို့ (၄) ရက်ထဲကနေ (၂) ရက်သုံးလိုက်ရပြီး (၁) ရက်မှာ မနက် ၁၀ နာရီကနေ ၄ နာရီအထိ ပြင်ဆင်ပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာလဲ ရုံးကပြသနာ တစ်စုံတစ်ခု ရှိရင် ဖြေရှင်းတာတို့၊ သူဌေးခေါ်လို့ သွားစကားပြောရတာတို့လဲ ရှိတာပေါ့။ Company မှာ တစ်နှစ်ကို (၂) ခါလောက် နှစ်စဉ်ပေါ်လစီ အပြောင်းအလဲ တွေအတွက် လူအများကို စကား ပြောရတာ ရှိပေမယ့် projector background ပေးထားပြီး ပြောတဲ့အကြောင်းအရာ က Power Point Slide က ညွန်းတဲ့အတိုင်း ကိုယ့်စကားနဲ့ ကိုယ် လက်တန်းပြောတာများတော့၊ ပထမတော့ ရန်ကုန်မှာ Projector သုံးရင် Power Point Slide ပါပြင်ပြီးသွားမယ်လို့ တွေးမိတယ်။ တကယ်တော့ Slide ပြင်ဖို့ကလဲ အချိန်တော့မရှိတော့ပါဖူး။ တကယ်တန်းလုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ အချိန်ယူလုပ်ရမှာပေါ့။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ ကိုစိုင်းလင်းသူက projector မသုံးဖူးဆိုတော့ PP Slide ညွန်းမရှိပဲ ပြောရဖို့ဖြစ်လာပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ ပြောမယ့် အကြောင်းအရာ တွေ အကုန် A4 စာမျက်နာ ၈ မျက်နာစာလောက် ချရေးထာပြီးပြီ။ ၁ နာရီလောက်မလောက်ဆိုတာ တော့ မပြောတက်တော့ ကဲ ဘန်ကောက်နဲ့ ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့အချိန်ကို ပြောကြည့် မယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး အိတ်ထဲကောက်ထည့်လိုက်တော့တယ်။
ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးမှတ်မှတ်ရရ တစ်ခုအနေနဲ့ ကျနော်က တခုခုလုပ်ရင် Planning ချတက်တော့ စကားသွားပြောရင် ဘာဝတ်မှာလဲ ဆိုပြီးလဲ တွေးမိတယ်။ ရန်ကုန်မှာ မိသားစု ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ အတွက်ယူသွားမယ့် အဝတ်အစား တွေကလဲ အဆင်သင့်ရှိနေတော့ အဲ့ဒီထဲက ရှပ်တစ်ထည်ဝတ်မယ်ပေါ့။ အဲ့တော့ neck tie စီးမလား၊ မစီးပဲ ရှပ်ပေါ်ကနေပဲ coat ထပ်ဝတ်မလားတွေးမိတော့ coat က ပူပါလိမ့်မယ်၊ neck tie နဲ့ပဲဝတ်မယ်လို့ တွေးလိုက်မိတယ်။ ရှိတဲ့ တိုင် ၄ခုလောက်ထဲက တစ်ခုကအမြဲဝတ်နေကျ အဆင်သင့် စီးထားပြီး သားလေး။ နောက်တစ်ခုက တလောကလက်ဆောင်ရထားပြီး ပို modern ဖြစ်တယ်လို့တွေးမိတော့ အဲ့တာကို စီး ချင်တယ်၊ ခက်တာက ကိုယ်က neck tie တစ်ခါမှကိုယ်ဟာကိုယ် မလုပ်ဖူးဘူး။ မလုပ်တက်တာပေါ့။ လုပ်ပေးနေကျ သူငယ်ချင်းကလဲ မရှိ၊ ဝတ်ကလဲ ဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ စင်္ကာပူက မထွက်ခင် တစ်ညမှာ ipad ကို ရှေ့မှာချ၊ youtube ကနေ ကြည့်ပြီး စီးလိုက်တာ ၄ ခါလောက်မှာ အောင်မြင်သွားတယ်၊ ၆ ခါမြောက်လောက်မှာတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အနေအထား အတိုင်းလှလှပပ လေးဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ကိုယ်ကိုကိုယ်လဲ အတော် ကျေနပ်သွားတယ်။ တစ်သက်လုံးအပျင်းကြီးပြီး ဒီဟာစီးနည်းကို မသင်လာခဲ့ပဲ အခုကျမှလုပ်တက်သွားလို့လေ။
ရန်ကုန်ရောက်တော့ ရေးထားတာကို ၂ ခါလောက်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပေမယ့်။ စကားပြောသလို မပြောဖြစ်ဖူး။ RHC သွားရမယ့် နေ့ နေ့လည် ၂ နာရီလောက်မှာ တစ်ယောက်ထဲ စကားပြော ကြည့်တာ ခပ်မြန်မြန်ပြောတာ ရယ် ကျော်ချပြီးပြောတာရယ်နဲ့ ၄၅ မိနစ်လောက်ကြာသွားတော့၊ တချို့အကြောင်းအရာတွေ ကို ဖျက်ထုတ်ဖို့ ရေးထားတဲ့အထဲမှာ အမှတ်အသား လေးတွေပြရတော့တာပေါ့။ ကျနော့်သမိုင်းက တိုက်ခန်းကနေ RHC ကို ခပ်စောစောလေးထွက်သွားမိတာ ကံကောင်းသွားတယ်။ လမ်းကကျော်သွားတော့ u Turn က ကွေးလို့မရတော့ လှည်းတန်းပွိုင့်ကိုရောက်၊ အဲ့ကနေ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမပေါ်မှာ ပြန်ကွေ့ပြီး၊ လှည်းတန်းပွိုင့်ကို ပြန်တန်းစီ၊ နဲ့လမ်းမှာ technology ကိုအားကိုးပြီး၊ Show Direction တွေဘာတွေ လုပ်တာလဲ မရတော့၊ Human Direction နဲ့ လမ်းဘေးက လူတွေ မေးမြန်း၊ RHC ကိုဖုံးဆက်မေးနဲ့ ချိန်းထားတဲ့အချိန်ထက် ၁၅ မိနစ်လောက်စောပြီး RHC ကို ရောက် ပါတယ်။ စင်္ကာပူတစ်မြိုထဲမှာနေပြီး မတွေ့ကြတဲ့ ကိုစိုင်းလင်းသူနဲ့ စကားလေးနည်းနည်းပါးပါးပြော၊ ပြီး သူ့အတန်းနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပေါ့။
သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှာ မြန်မာလိုစကားတခါမှမပြောဖူးတော့ နည်းနည်းလေးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်။ ရာသီဥတု ကြောင့်နဲ့ အတန်းထဲက လေအေးစက် က မီးအားကျနေတာ ကြောင့် နည်းနည်းပူတာကြောင့် အတော်လေးချွေးပြန်သွားတယ်။ ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်မိတ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက် ကျနော့်သင်တန်းသားပရိတ်သတ်က ကျနော့်အပေါ် စိတ်ဝင်တစား ရှိတာ ကြောင့် အတော်လေး ဝမ်းသာပြီး စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ၈၅% လောက်ပြောလိုက်နိုင်ပါတယ်။ အချိန်ကြောင့် တချို့အကြောင်းအရာ အတော်များများ ကို ဖြတ်ထုတ်လိုက်ရပါတယ်။ စကားစပြောပြီး နာရီဝက်လောက်နေတော့ ပူတာရယ် စကားပြောရတယ်ကြောင့် အာတွေခြောက်ပြီး ရေငတ်လာတာကြောင့် ပါလာတဲ့ရေဗူး ထုတ်သောက်ရတော့တယ်။ ပြောသမျှ တွေ ပြီးသွားပြီး Q & A Session မှာ ကျနော်ထင်ထားတာတွေ အတော်လေးလွဲသွားတယ်။ ကျနော်က မေးခွန်း ၂-၃ ခုလောက်နဲ့ ၁၅ မိနစ်အတွင်း ပြီးမယ်လို့ မှန်းထားပြီး အဲ့ဒီက အပြီး တခြားက appointment ကို တောင် အချိန်ကိုက်လောက်လုပ်ထားတာ။ Q & A Session မှာမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေက တော်တော်လေးများပြီး စိတ်ဝင်စားစရာတွေကြီးပါပဲ။ အဲ့ဒီအတွက် နောက်ထပ် ၁ နာရီထပ်ကြာသွားပါတယ်။ Q & A ပြီးတော့ ပြီးမလားမှတ်ပါတယ်၊ တချို့သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများက အများနဲ့ မမေးချင်လို့နဲ့တူပါရဲ့ private ထာလာမေးကြာ တော့ နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ်ကြာပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပါလာတဲ့ 600ml ရေဗူးထဲကရေလဲ ကုန်ပါပြီ။
ချိန်းထားတဲ့ appointment ကိုလဲ ဖျက်လိုက်ပြီး အိမ်ကိုတန်းပြန်မောင်းတော့တာပါပဲ။ အိမ်ရောက်တော့ လူလဲ အတော်လေးပင်ပမ်းသွားပါတယ်။ ရေမိုးချိုး ထမင်းစားပြီး လို့ ဖုံးကို ကြည့်လိုက်တော့ fb notification ပေင်း ၇၀ ကျော်လောက်တွေ့တော့ ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့။ RHC သင်တန်းသားများစီက friend request လုပ်ထားတာတွေပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခရီးသွားဟန်လွဲ ရန်ကုန်မှာ RHC သင်တန်းသားများ အတွက် စကားပြောခွင့်ရလို့ ကိုယ့်အတွက်လဲ ဂုဏ်ယူသလို၊ အမိမြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်များအတွက် တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ပံ့ပိုးပေးခွင့်ရလို့ အများကြီး ကျေနပ်ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း ....
Posted by KO at 5:35 PM No comments:
ကျွန်တော်၊ မြန်မာ (၂) ဦး နှင့် Communication
ဒီ Short note လေးကတော့ ဘာရယ်လို့မဟုတ်ပဲ ဒီတစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်းမှာ ကြုံရတာလေး ချရေးထားတာပါ။ ပထမတော့ fb status ပေါ်ကပဲ ရေးမယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးထားပေမယ့် ရေးရင်းနဲ့ ဇာတ်လမ်းရှည်လာတော့ note အဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ ရယ်ကျနော့်ရဲ့ ဟာလာဟင်လင်း ဖြစ်နေတဲ့ blog ရယ်ပေါ်တင်ရအောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းလေး တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် စွာပဲ မြန်မာ (၂) ယောက်နဲ့ communication လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ အလုပ်အတွက် အင်တာဗျူးပါ။ ကျနော့်သူဌေးစီကနေ တိုက်ရိုက် refer လုပ်လာတဲ့အတွက် weekend တောင်မရှောင် Out of Office အင်တာဗျူးကို shopping mall တစ်ခုမှာလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျ။ အလုပ်လျှောက်ထားသူကလဲ သိပ်မဆိုးဘူးပေါ့၊ သို့သော်ကျနော်တို့ အလုပ်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ နည်းနည်း ဝေးနေတော့ ကျနော် HR Services တွေ consultant အဖြစ်လုပ်ပေးနေတဲ့ company တစ်ခုကို refer ထပ်လုပ်ဖို့ပြောလိုက်တယ်။ နောက်နေ့ ရုံးတက်တဲ့နေ့မှာ သူဌေးကို ပြောပြတော့ မင်းကြည့်ရတာ အဆင်ပြေရင် လစာညှီနှိုင်းတာ အဆင်ပြေရင် ငါ့တို့ဖက်မှာပဲ နည်းနည်းသက်ဆိုင်တဲ့ဌာနမှာခန့်ပေးလိုက် ပါဆိုတော့ ကျနော် သူ့ကို ကျနော့်ရုံးမှာ ခေါ်တွေ့ပါတယ်။ အစစအရာရာ အစဉ်ပြေတယ်ပြောရမှာပါ။ လစာလဲ တောင်းထားတာ အတော်လေးများပေမယ့် ဒီခေတ်ဒီအခါ ဒီလောက်ပါပဲလေလို့ဆိုပြီး အလုပ်ခန့်ထားဖို့ အကြောင်းအရာ တွေ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ အလွန်တရာ communication ကကောင်းနေတော့ သူ့ကိုယ်သူ အရမ်းယုံကြည်မှုတွေ ရှိနေတာကြောင့်လား ဘာကြောင့်မှန်း မသိဖူး၊ ကျနော်တို့ သူ့ကိုပို့မယ်ဆိုတဲ့ ပရိုဂျက်တစ်ခုကို သူ့အရင့်အလုပ်က အဲ့မှာ ဆပ်ကွန်းဝင်နေတာမို့လို့ ဖြစ်နိုင်ရင်မပို့ပါနဲ့လို့ ပြောပါတယ်။ ကျနော်က ဘာလို့လဲလို့မေးတော့ အရင်သူဌေးက ပြန်ခေါ်နေမှာဆိုးလို့ပါတဲ့။ သူ့စီတော့ ပြန်မလာပဲ ဘာလို့ သူများစီမှာ အလုပ်သွားဝင်တာလဲ လို့မေးနေမှာ ဆိုပါတယ်တဲ့။ ကျနော်က စင်္ကာပူမှာ ဒါမျိုးဖြစ်တာ အဆန်းတကြယ်မဟုတ်ပါဖူး။ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိကြတာပဲလေ။ ဒီလောက်သေးတဲ့ တိုင်းပြည် လေးရဲ့ same industry မှာ ပြန်တွေ့ကြတာတွေကပုံလို့ပါ။
ကျနော် တော်တော်လေး တွေဝေသွားတယ်။ ပထမအချက်အနေနဲ့ အလုပ်ခန့်စာတော့ မပြောနဲ့အော်ဖာ ပေးတဲ့ တရားဝင်အီးမေလ်းလေးတောင်မရေးရသေးတဲ့ အချိန်။ဒုတိယလူတွေ့စကားပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ ငါဘယ်နေရာပဲ သွားချင်တယ် ဘယ်နေရာတော့ မသွားချင်ဖူး ပြောနေတော့ အဲ နည်းနည်းတော့ ခက်သွားပြီပေါ့။ အခုချိန်မှာတောင် အိအ ဂျိဂျ ဖြစ်နေရင် ဒီလူ့နှယ် နောင်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ လို့တွေးမိသွားတယ်။ ဒုတိယအချက် အနေနဲ့ သူက အရင်အလုပ်နဲ့ ပြသနာမရှိပါဖူး လို့ ပြောထားပါရက်နဲ့ ဘာလို့ အရင်အလုပ်က ပိုင်ရှင်နဲ့မတွေ့ချင်ရတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ထွက်လာပါတယ်။ တခြား HR တွေတော့ မပြောတက်ဖူး ကျနော်အမြင်အရ ဆိုရင်တော့ ဒါသိပ်ကောင်း တဲ့လက္ခဏာာမဟုတ်ဖူး လို့ သုံးသပ်ချက်ချမိတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်ဒီပရောဂျက်ကို တကယ်ကြီးမသွားချင်အုံးတော့ ဒီအချိန်ကြီးမှာ မပြောသင့်ဖူးလို့ မြင်တာပဲ။ All the way အခြေအနေတွေ ကောင်းနေပါရက် communication က အဆင် ပြေချောမွေ့နေပါလျှတ်နဲ့ ဆင်ပြောင်ကြီးအမြီးကျမှတစ် ဆိုသလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျနော့်မှာလဲ ကြမ်းကျွံရင် နှုတ်လို့ရတယ် စကားကျွံရင်နှုတ်လို့ မရဆိုသလို စကားကအတော်လေးကို ကျွံထားပြီးနေပြီ၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် နှုတ်နဲ့တောင်ခန့်မယ် လို့ပြောပြီးနေရက်နဲ့ စကားပြန်နုတ်ရမှာခက်နေရော။ တကယ်ဆို ကျနော့်လက်ထဲ ရောက်နေတဲ့ case တွေကို ချက်ချင်းပြီးစီးအောင်လုပ်တာကြောင့် S Pass ကို ချက်ချင်းတင်ဖို့ MOM online ပေါ်တောင်တက်ပြီးနေပြီ။ အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲ ခေါင်းထဲမှာ အလျှင်အမြန်တွေ စဉ်းစားရတာ ဘယ်နှယ့်ဖြေရှင်းရမလဲပေါ့။ ကဲနောက်တော့ ကျနော့်လက်ထောက် ခွင့်ယူထားတာကို အကြောင်းပြပြီး နောက်နေ့မှာ လက်ထောက် HRE ကနေဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ပြောလိုက်ရတော့တယ်။
နောက်နေ့ကျတော့ ကျနော့်သူဌေးကို အစီရင်ခံတဲ့အချိန်မှာ ဒီလိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ခန့်အပ်ရန်မသင့်တဲ့အပြင် သက်ဆိုင်ရာဌာနကြီးမှူးကလဲ မခန့်အပ်စေလိုကြောင်း ရှင်းပြပြီးတဲ့နောက် ကျနော် လျှောက်ထားသူစီကို sms လှမ်းပို့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ company က စိတ်မဝင်စားသော်လည်း ကျနော့် client company က ခန့်နိုင်သေးတယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတော့ ကျနော်တို့ company ဖက်က ဌာနကြီးမှူးက အလုပ်ခန့်ထားရေးအတွက် ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူအုံးမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အလုပ်ခန့်ထားရေးကို ခေတ္တဆိုင်းငံထားလိုက်ကြောင်းနဲ့ တခြား company တစ်ခုကိုလဲ အလုပ်ခန့်နိုင်ရေးအတွက် refer လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပို့ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ယနေ့တိုင် ဘာအကြောင်းပြန်ကြားချက်မှ မရပဲ။ communication က ပျောက်ဆုံးသွားပါတယ်။ ကျနော့်ကို စိတ်နာပြီး ပြန်မပြောတော့တာလဲ ဖြစ်နိုင်သလို ဒီကိစ္စ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဖူး ပြန်ပြောနေစရာ မလိုဖူး ဆိုပြီး ပြန်မပြောတာလဲပဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့။ ကျနော့်ဖက်ကလဲ စကားလွန်ထားတာလဲ ပါတော့ ကိုယ်ကိုကိုယ် လဲ မကောင်းတဲ့ကောင်ပါလားလို့ အပြစ်တင်မိတယ်။ ကျနော့်ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံ အရတော့ ကျနော်အလုပ်ရှာနေတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဆိုရင် company တစ်ခုက အလုပ်ခန့်တယ်လို့ ပြောခဲ့ရင် တရားဝင်အလုပ်ခန့်စာမှာ လက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့ အခါကြမှ ကျနော်အလုပ်ရှာတာကို စိတ်ဒုန်းဒုန်း ချပြီး ရပ်ပါတယ်။ Pass လျှောက်ထားရတဲ့ အလုပ်ရှာတဲ့ သူ များကို တော့ ဝန်ကြီးဌာနက approval ကျမှ အလုပ်ရှာတရပ်ပါလို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်း ကတော့ ဒီလိုပါ။ ရှေ့လမှာကျင်းပါ့မယ့် ၂၈ ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲလာပြိုင်မယ့် ရွက်လှေအားကစားသမားများအတွက် ဆိုပြီးတော့ လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေး တွေ စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်မှာလုပ်တာကြောင့်ရော၊ သံယောဇဉ်ကြောင့်ရော၊ ပြိုင်ပွဲလာပြိုင်ကြတဲ့ အားကစားသမားများလည်း ပိုပျော်ရအောင်လို့၊ ကိုယ်တက်နိုင်သလောက်လေး လုပ်ထားတာလေးပါ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သတ်သတ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်ချင်တော့ အသင်းရဲ့ လိုဂို လေးတွေ ကို အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေမှာ ရိုက်ခတ်မယ်ပေါ့။ ရွက်လှေအဖွဲ့ချူပ် အထွေထွေမန်နေဂျာ စီက ခွင့်ပြုချက်ရပြီးတာနဲ့ တပြိုင်နက်ထဲ အထွေထွေမန်နေဂျာ စီကနေ Cc: email တွေထဲမှာ သူနဲ့သက်ဆိုင် တဲ့ဆိုင်ရာလူများကို ဘယ်လိုလုပ်ပါလို့ ညွှန်ကြားတော့ လိုဂိုဒီဇိုင်နာက ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုဂိုတွေ
ကျနော့်စီကိုပို့လိုက်ပါတယ်။ အီးမေလ်းကို ရတော့ ဖိုင်က ၄ ခုပါတယ်။ ၂ ခုကတော့ jpg နဲ့၊ ၂ ခုက ဘာမှန်းမသိဖြစ်နေရော ကျနော့်လက်တော့ပ်နဲ့ ရုံးက ကွန်ပြူတာမှာ အဲ့ဒီ ဖိုင် ၂ ခုကို ဖွင့်လို့ရတဲ့ software က မရှိဖူးဖြစ်နေတာ။ ကွန်ပြုတာနဲ့ နည်းနည်းဝေးတဲ့ ကျနော်ဆိုတဲ့ ကောင်ကလဲ အဲ့ဒီဖိုင် ၂ ခုက Photoshot မှန်းမသိပြန်ပါဖူး။ အဲ့တော့ ကျနော်က ဒီဇိုင်နာစီကို အီးမေလ်းပြန်ပြောဖြစ်တယ်။ resolution ကောင်းတာလေး ပို့ပေးပါလို့။ ခနနေတော့ သူက gtalk ကနေအက်လိုက်တော့ သြော်ပို အဆင်ပြေတာပေါ့ တိုက်ရိုက်ပြောလို့ရတာပေါ့ ဆိုပြီး လှမ်း ပြီး msg လေးပို့ထားလိုက်တယ်။ သူက ပြန်မပြောတော့ မအားလို့နေမှာပါဆိုပြီး ကိုယ်လဲကိုယ်ဟာနဲ့ ကိုယ်ပေါ့။ တော်တော်ကြာတော့ ဟိုင်း .. what? ဆိုပြီး ပြန်တက်လာတော့ အယ် ဒီလူ communication လုပ်တာ နည်းနည်းများ ကြမ်းတမ်းလား
လို့တွေးမိတယ်။ what ကို မြန်မာလိုပြန်ရင် "ဘာလဲ " ပေါ့။ မသကာ Yes လို့ပြောရင်တောင် နည်းနည်း ခံသာသေးတယ်။ စိတ်ကနည်းနည်းလေး ခုသွားတော့ အထွေထွေမန်နေဂျာဆီတောင် စာလှမ်းရေးချင် စိတ်ကို ပေါက်သွားတယ်။ ကိုယ့်ထက်လဲ အသက်ကြီးနိုင်သလို ငယ်လဲငယ်နိုင် သော်လည်း သြော် သူ communication မလုပ်တက်လို့ပဲလို့ ဆိုပြီး သည်းခံလိုက်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။
ကျနော်ပို့ထားတဲ့စာလဲ မပြန်ပါဖူး။ နောက်နေ့ကျတော့ ကျနော် supplier တွေက high resolution တွေတောင်းကြပြန်ရော၊ ခက်လှချီရဲ့ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ ပြီး သူအရင်က ပေးထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ပြန်ကြည့် ဖြစ်တဲ့ အခါ supplier စီကပြောထားတဲ့ အီးမေလ်းထဲမှာ PSD ဆိုတာလေးရေးထားတာ သတိထားမိတယ်။ အဲ့ဒီဖိုင်တွေ ကြည့်တော့ PSD တဲ့ဆိုတော့ အဲ့တော့မှ သိတယ် သူပို့ထားတာ high rosolution photoshot ဖိုင်တွေပဲဆိုပြီး အီးမေလ်းကို supplier တွေစီ forward လုပ်လိုက်ပြီး supplier တွေစီကနေ simple တွေ ပြန်ပို့လာ ပါတော့တယ်။ ကျနော်ပြောချင်တာ က ကျနော်မသိလို့မေးတဲ့ တောင်းတဲ့ ဟာကို ဘာကြောင့်များအကြောင်းမပြန်ရတာလဲ ပေါ့။ တကယ်ဆို စာတကြောင်းစာပါပဲ။ ပို့ထားတဲ့ဖိုင် ၂ ခု high resolution ပါ။ အဲ့တာ PSD ဖိုင်ပါဆို။ ကျနော်သိပြီပေါ့။ ကိစ္စကအဲ့မှာတင်ပြီးနေပြီ။ ခက်တာက Communication က မလုပ်တော့၊ ငါ့ကိုလုပ်ခလစာပေးထားတဲ့ ကောင်မဟုတ်ဖူး၊ communication လုပ်စရာမလိုဖူးဆိုပြီးများ မလုပ်တော့ ကျနော့်မှာ နည်းနည်းလေး ကသိလင်တ လေးဖြစ်သွားရတော့ပေါ့ဗျာ။ သူအရမ်းတွေ အလုပ် များနေတာကြောင့်လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Communication နဲ့ဆက်စပ်ပြီးဆက်ပြောရရင် ကျနော့် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ company ရဲ့ HR Practice တွေထဲမှာ အင်တာဗျူးကွန်ဖန်းလုပ်တာ၊ အလုပ်ခန့်ထားကြောင်းလှမ်းအကြောင်းကြားတာ တွေကို အီးမေလ်းနဲ့ အတိအကျ တွေ ရေသားပြီးပို့တဲ့ အလေ့အထ ကို ကျင့်သုံးပါတယ်။ ကိုယ်ရုံးကိုလာဖို့အတွက် ဘယ်ရထားဘူတာကနေ ဘယ်ဘတ်စ်ကားကိုစီးလို့ ဘယ်မှတ်တိုင်မှာ ဆင်းပါဆိုတာကအစ
တကယ်လို့များ အနီးဆုံး ဘူတာကို ရုံးကကားလွှတ်ကြိုမယ်ဆိုရင် သတ်မှတ်နေရာမှာ စောင့်ဖို့အတွက်
ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ အတိအကျ ဖော်ပြပြီး communication လုပ်ပါတယ်။ အလုပ်လျှောက်ထားသူများရဲ့ ၇၀% လောက်က တကယ်လို့များ appointment ကိုရွေ့ဆိုင်းလိုရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဖျက်သိမ်းလိုရင်ပဲဖြစ်စေ၊ နောက်ကျနေသော်လည်းကောင်း ရုံးကိုဖုံးဆက်ပြီး သို့မဟုတ် အီးမေးလ် လှမ်းပို့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီတလောမှာ ဖြစ်ချင်တော့ ရုံးကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကြောင့် လုံးရှပ်နဲ့ communication လုပ်လိုက် ရပါတယ်။ လုံးရှပ်ဆိုတာ တရားမဝင်ငွေတိုးချေးစားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များကို စင်္ကာပူမှာခေါ် တဲ့စကားရပ်ပါ။
ရေးထားတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့မဆိုင်ပေမယ့် ဒီလုံးရှပ် အကြောင်းကို သိရအောင်ပြောပြပါမယ်။ သူတို့ရဲ့ဈေးကွက် က ဘဏ်ကနေတရားဝင်ငွေချေးခွင့်မရတဲ့ လစာနည်း စင်္ကာပူသားတွေ နဲ့ လူမွဲစာရင်း အဖြစ်ကြေငြာထား တဲ့သူတွေ၊ အကြွေးလည်ပင်းနစ်လို့ ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ လူတွေပါ။ သူ့စီကငွေချေးရင် အပေါင်ပစ္စည်း မလိုသလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူပေးရပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်မှာ အိမ်လိပ်စာအတိအကျပါ တာ ကြောင့် တကယ်လို့များငွေချေးပြီး ပြန်မပေးပဲ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်နေရင်တော့ ပထမဦးဆုံး အိမ်တံခါးရှေ့ ကိုသင်္ဘောဆေးနဲ့ပတ်၊ ဓာတ်လှေခါးအတက်အဆင်းနေရာတွေမှာ အိမ်လိပ်စာနဲ့ ငွေချေးထားရင် ပြန်ပေးဆိုတဲ့ သင်္ကေတတွေနဲ့ ချေးပြီးပြန်မပေးတဲ့သူကို ဒုက္ခရောက်အောင် အရှက်ကွဲ အောင်လုပ်တော့တာပါ။ ဒါမှ မပေးသေးရင် လူမိုက်များလွှတ်ပြီး လူကိုရန်ပြုတဲ့အထိပါ။ အဲ့ဒီလုံးရှပ်စီကနေ
ကျနော့်ရုံးက ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကငွေသွားချေးပြီး ပြန်မဆပ်တော့ လုံးရှပ်ကသူ့ကို ဒုက္ခပေးချင်ရော၊
အခုနောက်ပိုင်း စင်္ကာပူ HDB တိုက်ခန်းတွေရဲ့ ဓာတ်လှေခါးရပ်တဲ့နေရာ နဲ့ လှေခါးဝတိုင်းမှာ ရဲ စီစီတီဗွီ တွေ တက်လိုက်တော့ လုံးရှပ် ကအရင်လိုသိပ်သောင်းကြမ်းလို့မရတော့တဲ့ အခါ သူ့နောက်ကို ခြေရာခံ တော့ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာသိပါတယ်။ သူ့မိုဘိုင်းဖုံးကို လုံးရှပ်ကဖုံးဆက်တဲ့အခါ လက်ခံမပြောတဲ့ အတွက်
လုံးရှပ်က ရုံးကအချိန်နဲ့အမျှဖုံးတွေဆက်ပြီး နှောက်ယှက်တော့တာပါပဲ။ ဖုံးကိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေလဲ ဆဲဆို တော့ ဝန်ထမ်းတွေက ကျနော့်စီကိုပြန်ပြောတာနဲ့ နောက်တခါလာရင် ကျနော့်စီဖုံးလွှဲလိုက်ပါဆိုပြီး လက်ခံ
ပြောကြည့်တာပေါ့။ ဒီဝန်ထမ်းရဲ့ ပုဂိုလ်ရေးငွေချေးတဲ့ ကိစ္စက ငါတို့နဲ့မပတ်သတ်လို့ တို့စီမဆက်ပဲ မနှောက်ယှက်ပါနဲ့လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြောပေမယ့် မရပါဖူး။ မရတော့ ရဲ ကို တိုင်ရပါလိမ့်မယ်ဆို တော့ အောင်မလေး ပိုဆိုးသွားပြီး ကျနော့်ကို တရုတ်လိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရော မိုးမွှန်အောင်ဆဲ နင့်ကိုလဲ ငါ လူမိုက်တွေလွှတ်ပြီး ချခိုင်းမယ်လဲ ချိန်းချောက်နဲ့ဖုံးထဲကနေ ပက်ပက်စက်စက် တွေပြောတော့တာပါပဲ။
ကျနော်လဲ ပြောရင်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ ဖုံးချထားလိုက်တယ်ပေါ့။ နောက်နေ့တွေလဲ မရပါဖူး ထပ်ခါထပ်ခါ တွေဆက်ပြီး ပြောတော့ ဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ မရတော့ဖူးဆိုပြီး အဲ့ဒီဝန်ထမ်းကိုခေါ် အကြိုးအကြောင်းမေး မြန်းပြီး လုံးရှပ် နဲ့ ဖုံးထဲမှာပြောဖို့ communication လုပ်ပေးရတော့တယ်။ လုံးရှပ်ကလဲ အဲ့တော့မှ လေသံကပျော့သွားပြီး ဘရားသား ဘာညာဖြစ်လာတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ဝန်ထမ်းများ ကို အလွန်ကူ ညီတက်သော ကျနော့်သူဌေးက ငွေထုတ်ချေးပြီး လုံးရှပ်ကို ငွေပြန်ပေးဖို့စိုက်ထုတ်လိုက်ရရော။ ဒီလူ့လက်ထဲကို ငွေ ပေးလိုက်ရင်မသေချာမှာဆိုးလို့ လုံးရှပ်ကလဲ ဂျွန်နသန်ပဲ သူ့စီပေးပေးပါတဲ့။ ကျနော့်
သူဌေးကို ပြောပြတယ် စင်္ကာပူတစ်မြို့လုံးမှ လုံးရှပ် နဲ့ communication လုပ်ရတဲ့ HR Manager ဆိုလို့
ကျနော် တစ်ယောက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်လို့။ လုံးရှပ်ဆီကို communication လုပ်ချင်ရင် သူ့ပေးထားတဲ့ဖုံး
နံပါတ်ကို လှမ်းခေါ်ရတယ်၊ ဖုံးက နိုင်ငံပြင်ပ (မလေးရှား ဖြစ်နိုင်) မှာပါ။ ဖုံးလှမ်းခေါ်လိုက်ပြီး မကြာခင်ပဲ
သူ့စီကနေ ဖုံးပြန်ခေါ်ပါတယ်။ အင်တာနက်ကတဆင့်ခေါ်တဲ့ ဖုံးပါ။ ငွေအပေးအယူလုပ်ဖို့ ပြောကြပြီး
တော့ လွှဲစေချင်တဲ့ ဘဏ်အကောင့်ကို လွှဲပြီးတာနဲ့ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း လုံးရှပ်စီကနေ unknow sms နဲ့
ငွေလက်ခံရရှိကြောင်း အကြွေးကျေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း အကြောင်းပြန်ပြီး communication လုပ်ပါတယ်။
သူတို့လို အမှောင်ထဲက တရားမဝင် အလုပ်လုပ်တဲ့ လူတွေတောင် communication ကောင်းကောင်း လုပ်တက်ကြတာ အလင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ ကျနော်တို့တွေ အတွက် လိုအပ်ခဲ့ရင် ပိုပြီးများ communication လုပ်ဖို့မလိုအပ်ဖူးလားဗျာ။ ။
Posted by KO at 1:04 PM No comments:
စင်္ကာပူတွင် (၉) နှစ်ကြာသောအခါ အပိုင်း (၁)
ကျနော့်ရဲ့ ပိုစ့်စီးရီးတစ်ခုအဖြင့် စင်္ကာပူကို အခြေချနေထိုင်တဲ့ နှစ်ပတ်လည်ရောက်တိုင်း ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ရေးတဲ့အနေနဲ့ရယ် ကိုယ်ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ် ဘဝကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းလာခဲ့တယ်ဆို တချိန်မှာ ပြန်ဖတ်လို့ရအောင် နဲ့ ကျနော့်ညီအကို မောင်နှမသူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ စာဖတ်ပရိတ်သတ်များဖတ်ရအောင် ရေးဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူကိုအခြေချခဲ့တာ လာမယ့် ဇွန်လ (၆) ရက်နေ့ဆိုရင် (၉) နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ရှေ့လထဲမှာ ဆီးဂိမ်းလုပ်အားပေးရှိတာရယ်၊ ပါပါးနဲ့မာမား ဆီးဂိမ်းပွဲလာကြည့်မှာရယ်ကြောင့် ရေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့ အခုလထဲမှာ ကြိုတင်ရေးပြီး ကြိုတင်လိုက်သည်။ လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်က များပြားလှတဲ့ တာဝန်နဲ့ဝတ္ထရားတွေကြောင့် ဘာစာမှမရေးဖြစ်တော့တာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကထဲကပါ။ မနှစ်ကဒီလိုအချိန်မှာတောင် စင်္ကာပူ (၈) နှစ်ပြည့်အကြောင်းမရေးဖြစ်ခဲ့ ပါဖူး။
Professional Life လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ ကျနော် ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင်းမှာ HR Specialist Diploma ကို နန်ယန်ပေါ်လီကနေ အောင်မြင်စွာနဲ့ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မော်ဂျူး (၆) ခုမှာ (၂) ခုလောက်ကအတော်လေးခက်ခက်ခဲခဲ ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည်ပေါ့။ ကျနော့် Graduation ကိုကျနော့်မိသားစုတစ်ခုလုံး တက်ရောက်အားပေးချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ Company ကလဲ ဒီအထူးပြုဒီပလိုရပြီး သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Asst HR Manager ကနေ HR Manager ရာထူးကို တိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တန်းအမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်တော့ ယနေ့တိုင် ကျနော် ကျင့်သုံးနေတဲ့ HR Policy နဲ့ အိုင်ဒီယာတွေဟာ ဒီအထူးပြုဒီပလိုမာစီကနေ ပြန်လည်အသုံးချခဲ့တာဆိုလို့ ကျနော့်စိတ်ထင် ၂၀%အောက်မှာပဲရှိမှာပါ။ ဒီပလိုသင်တန်းမှာ တစ်ခုမှနားမလည်ခဲ့တဲ့ Performance Management လို့ခေါ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကို စီမံခန့်ခွဲတဲ့ မော်ဂျူးကိုတော့ Spring Singapore လို့ခေါ်တဲ့ စလုံးအစိုးရရဲ့ Company တွေအပေါ်ကူညီတဲ့ဦးစီးဌာနကနေ ထောက်ပံတဲ့ငွေ (Grant) ၅၀၀၀ ကိုသုံးပြီး သင်တန်းက ကိုယ်နဲ့ကီးကိုက်တဲ့ဆရာတစ်ယောက်ကို အတိုင်ပင်ခံအနေနဲ့ဌား ရမ်းပြီး Company ရဲ့ Performance Management System ကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင်အဆင့်မြင့်တင် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း Company Management Team အနေနဲ့ အတိုင်ပင်ခံ ရဲ့ HR နဲ့ပတ်သတ် တဲ့ အကြံပြုချက်တွေကိုသာလက်ခံခဲ့ပြီး၊ တခြားတွေ့ရှိချက်တွေကိုတော့ သိပ်လက်မခံချင်ကြပါဖူး။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ဟာ Company အတွက် ဝင်ငွေသိပ်မကောင်းတဲ့အတွက် ၂၀၁၄ နှစ်ကုန် ဆုကြေးငွေကို အမြင့်ဆုံး အခြေခံလစာရဲ့ ၅၀% အထိကိုပဲအမြင့်ဆုံးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တဆက်ထဲမှာပဲ ဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေ ကို ပြန်အဖတ်ဆယ်နိုင်ဖို့အတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်းမှာ အလုံးအရင်းနဲ့ ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော့်အနေနဲ့ ကျနော့် HR အပိုင်းထဲကနေ Company နလထူနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရမှာမို့ကုန်ကျစားရိတ်ခြွေတာရေး အစီအမံတွေကို အလျှင်အမြန်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး တဲ့အနောက် စီမံကိန်းကို အဆင့် ၁ / ၂ / ၃ သတ်မှတ်ပြီး ၂၀၁၅ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်အကောင်အထည်ဖော်ပါတယ်။ ကုန်ကျစားရိတ်ခြွေတာရေး လို့ ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာနဲ့အမျှ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော၊ ငွေယိုပေါက်ဖြစ်နေသော အရာမှန်သမျှကို တားဆီးပိတ်ပင်ရတာနဲ့အမျှ၊ လူသဘောတရားအရ ကိုယ့်အကျိုးအမြတ်ထိခိုက်လာ ခဲ့ရင် ဆန့်ကျင်တက်တဲ့သဘောသဘာဝတွေကြောင့် ကျနော့်ရဲ့ စီမံကိန်းတွေက အစပိုင်းမှာ အခက်အခဲတွေရှိခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းမှာ တော့ အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ နဲ့ရယ် လျို့ဝှက်ချက်မဟုတ်တာရယ်ကြောင့် ဒီစီမံကိန်းတွေထဲ က တစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ ကျနော့် စာဖတ် ပရိတ်သတ်ထဲမှာ HR နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ လေ့လာဆည်းပူးနေတဲ့ သူတွေများရှိခဲ့ရင် အတုယူနိုင်အောင်ပါ။ ကျနော့် plan တစ်ခုမှာ (၃) နှစ်နှင့်အထက် လုပ်သက်ရှိသူ မန်နေဂျာအဆင့်မှန်သမျှကို အခြေခံလစာ ၆% ၆ လစာလျှော့ချဖို့ပါပါတယ်။ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာကစလို့ မန်နေဂျာအဆင့်မှန်သမျှပါ။ ကျနော်က လစာငွေ တွေလျှော့ချမယ့် လူစာရင်းနဲ့ လျှော့ချခဲ့မယ်ဆိုရင် ငွေဘယ်လောက် အကုန်အကျ သက်သာသွားမယ့် အကြောင်းကို မန်နေဂျင်းကိုတင်ပြတော့ သူကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ နာမည်တွေ ကြည့်တော့ ကျနော့် နာမည်ပါတာတွေပါတယ်။ policy အရ (၃) နှစ်လုပ်သက်အထက်လို့ပြောထားတဲ့အတွက် တကယ်တန်းပေါ်လစီအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင် ကျနော်ပါစရာမရှိပါဘူး။ သူက မင်းပါစရာမလိုဘူးလေတဲ့၊ မင်းက (၃) နှစ်မှ မပြည့်သေးပဲလို့ပြောတော့၊ ကျနော်က ဒီလိုလစာဖြတ်တောက်တဲ့ ပေါ်လစီမျိုးချမှတ်တဲ့အခါမှာ ချမှတ်တဲ့ သူကိုယ်တိုင်ပါမှ တခြားသူတွေ ပြောစရာကနေလွတ်မယ်၊ ဒီပေါ်လစီကို အကောင်အထည်ဖော်ရတာလွယ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ ၆% က မင်းကို မထိခိုက်စေဖူးလားတဲ့။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျနော့် ကို နောက်ထပ်ရာထူးတစ်ခုထပ်ဆောင်းပေးထားပြီး လောလောလတ်လတ် လစာတိုးပေးထားတော့ ပြန် ဖြတ်မယ်ဆိုရင် မကောင်းဖူးထင်နေပုံရတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ၆% ကလဲ ထိခိုက်တာပဲပေါ့လို့၊ တဆက်ထဲ Company အခြေအနေကောင်းလာခဲ့ရင် ၆% ကို ၆ လလျော့ခဲ့တဲ့ငွေတွေကို ပြန်ပေးမယ်လို့ ပေါ်လစီထဲမှာ ထည့်ရေးရင်ပိုကောင်းတာပေါ့လို့ ပြောတော့ အင်းကောင်းသားပဲတဲ့ ထည့်လိုက်လို့ လမ်းညွှန်ပါ တယ်။ အဲ့ဒီမှာ HR တစ်ယောက်ရဲ့ စကားအသွားအလာဟာ ပေါ်လစီချမှတ်မှုတွေအပေါ်မှာ အများကြီး သက်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက် သတိထားစရာပါ။ HR အနေနဲ့ တခြားဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာ ရော ကိုယ့်နဲ့ တန်းတူ လိုင်းမန်နေဂျာလို့ခေါ်တဲ့ ဌာနကြီးမှူးများ အပေါ်မှာပါ စံနမူနာဖြစ်ရအောင်၊ သာတူညီမျှ ဖြစ်ရ အောင်၊ မျက်နာမလိုက်ပဲ အမှန်အတိုင်းပြောရဲဆိုရဲ လုပ်ရဲကိုင်ရဲဖို့လိုပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ စီမံကိန်း အဆင့် ၁ ကိုတော့ အောင်မြင်စွာနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ အဆင့် ၂ ကိုစတင်ဖို့ တာဆူနေပါတယ်။ သို့သော်လည်း အဆင့် ၂ မတိုင်မီမှာ Company စပြီးနလံထူနိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းနေရပါတယ်။
Company ရဲ့အခြေအနေက သိပ်ကြီးအကောင်းကြီးမဟုတ်သော်လည်း အဆိုးဆုံးအခြေအနေ မဟုတ်တာ ကြောင့် ကျနော်ကိုယ်တိုင် အလုပ်ကထွက်ဖို့၊ တခြားအလုပ်တစ်ခုရှာဖို့ လောလောဆယ်အစီအစဉ်မရှိပေ မယ်၊ မြန်မာပြည် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေးဂျင့်ဖြစ်တဲ့ myjob.com.mm ကနေအခါအားလျှော်စွာ ဆက်သွယ်လာတဲ့ အတွက်မြန်မာပြည်ကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံတကာ Company ကြီးတွေအတွက် အရမ်း လိုအပ်နေတဲ့ အဆင့်မြင့် HR ရာထူးကြီးများ မိတ်ဆက်လာခဲ့ရင်တော့ တခါတခါ စကားပြောဆွေးနွေးဖြစ် ပါတယ်။ တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် အနေနဲ့ ကာလ်းစ်ဘတ် ဘီယာရဲ့ HR Director က စင်္ကာပူကိုရောက်နေတာနဲ့ ကြုံတော့ career discussion အနေနဲ့ ၁နာရီလောက်ကြာအောင် စကားပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ က မြန်မာအမျိုးသမီး အမေရိကန်နိုင်ငံသားပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားကို အမေရိကန်လေသံနဲ့ကိုပြောပြီး ထက်မြတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါပဲ။ သူတို့မျှော်မှန်းထားတဲ့လစာက ကျနော်ရနေတဲ့ လစာရဲ့ ၅၀% လောက်ပဲရှိ တော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အစဉ်မပြေနိုင်ကြမှန်း စကားဝိုင်းအဆုံးမသတ်မီထဲကသိနှင့်နေကြပြီးသားပါ။ ဒါမယ့် မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်ရှိ HR အခြေအနေကို သူ့စီကနေ နည်းနည်းပါးပါး သိလိုက်ရတာကတော့ ကိုယ့်အတွက် အမျက်ပေါ့ဗျာ။ ဒီတလောမှာတော့ ဥရောပအခြေစိုက် Electronic Cash transaction အလုပ်တွေ လုပ် မယ်ဆိုတဲ့ Company အတွက်ရယ်၊ ဟင်နီကန်ဘီယာအတွက်ရယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် နာမည်ကျော် ရေနံ company ကြီး တစ်ခု အတွက်ရယ်ဆိုပြီး မိတ်ဆက်လာတော့ ကာလ်းစ်ဘတ် နဲ့တုံးကလိုဖြစ်မှာဆိုးလို့ ဒီပမာဏငွေရမှာ စဉ်းစားမှာနော်ဆိုတော့ ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ အဲ့တာကြောင့် ကျနော်စကားနည်းနည်း ဆက်ပြောကြည့်ကြတယ်။ တဖက်ကစဉ်းစားနေတာက မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကို မြန်မာပြည်မှာ အလုပ် လာလုပ်ဖို့အတွက် အဲ့လောက်ငွေပေးစရာမလိုဖူးပေါ့။ အဲ့တာကို ကျနော်လုံးဝလက်မခံနိုင်တာပါ။ ဒီရာထူး ဒီလိုတာဝန်တွေအတွက် မြန်မာပြည်မှာ ရှာလို့မရလို့နိုင်ငံခြားလာရှာတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားဆိုရင်တော့ ဈေးတစ်မျိုး၊ တခြားနိုင်ငံခြားသားဆိုရင် ဈေးတစ်မျိုးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့အစထဲက စကားပြောစရာကို မလိုတာပါ။ တကယ်တန်း ဟုတ်ပြီ တောင်းတဲ့လစာပေးမယ် လာလုပ်ပါဆိုရင်တောင် စဉ်းစားရမယ့် အချက် တွေကု A4 စာမျက်နာ ၁ ခုစာလောက်ရှိပါတယ်။ ဆုံးရှုံးသွားရမယ့် life style၊ ၉ နှစ်ကြာကွဲနေတဲ့ ပတ်ဝန်း ကျင်တစ်ခုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ Human Resources တွေကြောင့်ကြုံတွေ့လာရမယ့် စိန်ခေါ်မှုတွေ အမျာားကီးမှ အများကြီးပါ။ ကျနော့်သူငယ်ချင်း ဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတကြီးကတောင် မိန့်ခွန်းထဲ ထည့်ပြောခံရတဲ့ လမင်းဦး တို့လို၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘာသာရပ်တွေနဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့တောင်ရတော့မယ် ဆရာ ဦးစံဇာနည်ဗိုလ်သား အမရတို့လောက်မတော်မတက်ပဲ သူတို့လို ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး နိုင်ငံကို တဖက်တလမ်းကနေ အထောက်အကူမပြုနိုင်သေးတာ အမှန်ပါလို့ ဝန်ခံပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် မေလ မှာ အဝလွန်နေပြီဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ကိုကိုယ် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါ တယ်။ ကျနော်ရဲ့ နာစေးတဲ့ ရောဂါ၊ နေရင်းထိုင်းရင် ဘာမှမလုပ်ပဲ ပင်ပန်းနေတာ၊ တခါတယံ အိပ်မပျော်တဲ့ ပြသနာတွေဟာ ကျနော့်နေ့စဉ်ဘဝကို ထိခိုက်လာပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် မေလက ကိုယ်အလေးချိန် ၉၂ ကီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် BMI 32 အဆင့်ဖြစ်နေပေမယ့် ကိုယ်ကိုကိုယ် ဝနေတဲ့လို့ ဘယ်တော့မှမထင်ခဲ့ ပါဘူး။ နန်ယန်ပေါ်လီက graduate ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Dover မှာရှိတဲ့ Singapore Polytechnic Graduate Guild မှာ ပေါ်လီအောင်အဖြစ် မန်ဘာကို လျှော့ဈေးနဲ့ဝင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သူ့စီမှာရှိတဲ့ Gym အသေးလေးမှာပဲ အပြေးစက်ပေါ်ပြေး၊ လမ်းလျှောက်စက်ပေါ်လျှောက်၊ ရေကူးနဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်ဘာအားကစားမှ မယ်မယ်ရရ မလုပ်တဲ့ body ကြီးကိုလှုပ်ရှားစေရပါတော့တယ်။ နေ့စဉ်ရုံးကအပြန် gym ကိုတိုက် ရိုက်သွား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် Weekend မှာလဲ လုပ်နဲ့ဆိုတော့ ၉၂ ကီလိုကနေ ၉၀ ကီလိုကို ကျလာတယ်။ ဝိတ်ကကျလာတော့ လူကအားတက်လာတယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ် ပေါ့။ ၂ လလောက်ကိုယ်ဟာကိုယ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက် ကျနော့်ရုံးက ကျနော့်လက်ထောက်က အားကစားလုပ်တာလဲ ဝါသနာပါ၊ စလုံးစစ်တပ်မှာလဲ အထူးလက်ရုံးတပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဆိုတော့ ကျနော့်ရဲ့ Weight Lose Mission ကြီးကို သူက Training Plan ချပေးပါတယ်။ ဘယ်နေ့မှာဘာလုပ်၊ ဘယ်နှမိနစ်ပြေး ဘာညာပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ ကျနော် ငယ်ငယ်က ရွက်လှေအသင်းမှာအလုပ်လုပ်တုန်းက အားကစားသမား (၂) ဦးကို တစ်ယောက်ကို ဝိတ်ချပြီး၊ တစ်ယောက်ကို ဝိတ်တင်ရတာ သွားသတိရတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်က ရေကူးရတာပဲ ကြိုက်တယ်။ ပြေးရတာဝါသနာကို မပါတာ။ မှတ်မှတ်ရရ အဲ့ဒီမှာလုပ်တုန်းက မနက်ပိုင်း Physical training အချိန်မှာ ကလေးတွေပြေးခိုင်းနေတုံး၊ ကျနော်တို့လေးစားကြောက်ရွံရတဲ့ ရွက်လှေအဖွဲ့ချူပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (ယခုဥက္ကဌ) ရောက်လာလို့၊ ကျနော့်မှာ သူမပြန်မချင်း ကလေးတွေနဲ့လိုက်ပြေးရတာ ဟာ နောက်ဆုံးပြေးခြင်းပါပဲ။ အဲ့ဒီမှာ ဝိတ်ချရတဲ့အားကစားသမားကို တစ်ရက် ၃ မိုင်လောက်ပြေးခိုင်းတာ သတိရမိတယ်။ အခုကျနော်ကိုယ်တိုင်ပြေးမှာ အတော်ပင်ပန်းတာပါလားလို့ပေါ့။ အပြေးစက်ပေါ်မှာပြေးရာကနေ Singapore Poly အားကစားကွင်း ထဲ မှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပတ်ရေကို တိုးတိုးပြေးဖြစ်တယ်။ အဲ့တုံးက စလုံးတပ်မတော်ကခေါ်တဲ့ လုပ်အားပေးစစ်တပ်မှာ ဝင်ပါမယ်စိတ်ကူးထား တော့ စလုံးတပ်မတော်ရဲ့ ကာယကြံ့ခိုင်မှု အောင်မှတ်ဖြစ်တဲ့ ၂.၄ ကီလိုမီတာကို ၁၂.၄၀ စက္ကန့်အတွင်း အပြီး ပြေးနိုင်ရတယ်ဆိုတော့ အဲ့တာကို ရည်မှန်းပြီးပြေးတာ။ ၂.၄ ကီလိုမီတာဖြစ်တဲ့ ၆ ပါတ်ပြည့်ပြီးတိုင်း ငါ ဘယ်တော့ မှာ အဲ့လိုမပြေးတော့ဖူးလို့ တွေးမိတဲ့အထိ မောဟိုက်လွန်းတာပါ။ ပေါ်လီကျောင်းရဲ့ အားကစားကွင်းထဲမှာ အပြေးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တော့ ပျိုပြစ်နုနယ်တဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူ တွေရဲ့ ရုပ်ပုံတွေက ကျနော့်အတွက် အများကြီးအားတက်စေပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲ ငါ သူတို့အရွယ်တုံးက သူတို့လိုကျောင်းသားဘဝ တွေမဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးဘူး။ အခုလက်ရှိကိုယ်နိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေ လဲ သူတို့လိုကျောင်းသားဘဝ ဖြတ်သန်းဖို့ဖြစ်လာစရာမမြင်သေးဘူးလို့ အတွေးနည်းနည်း လွန်မိတယ်။ ကျနော်သူတို့အသက်အရွယ် ကျောင်းသားဘဝ ၁၈-၁၉ ပေါ့။ ကျနော် ပြည်မြို့မှာ နာမည်ကျော်တိုက်ဂါးဘီယာကို နိုင်အောင်ဖိုက်ရင်း နဲ့ ဘီယာချမ်းရောင်းနေခဲ့တာ။ ပြည်မြို့ကနေ မန္တလေးအသွားမှာ ဘီယာတွေဈေးတက်မှာကြိုသိလို့၊ ကွနန်တင်နာကား နဲ့ လမ်းမှာရသမျှဘီယာတွေ ပြန်ဝယ်ပြီး ဈေးတက်ချိန်ပြန်ရောင်းခဲ့တာ ဘီယာကုန်သည် ပေါက်စဘဝပေါ့။ ကျနော်ဒါတွေ အတွက်ဝမ်းမနည်းပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးကျနော့်ဘဝကို စောစောစခဲ့တဲ့ အတွက် လောကကြီးအကြောင်းပိုနားလည်ပြီး ဒီအခြေအနေမျိုး ကို ရောက်လာတယ်လို့ပဲတွေးမိတယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ ကို တသက်လုံးလုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ကျနော့်မိဘတွေကို လဲ ကျေးဇူးတင်ပြီး အခုချိန်မှာ အတက်နိုင်ဆုံးကျေးဇူးတွေ ဆပ်နေဆဲပါ။
ကွင်းထဲမှာပတ်ပြေးနေရာကနေ အပြင်မှာသူများတွေလို ပြေးချင်လာတော့ ဒီပေါ်လီကျောင်းကြီး တပါတ် ပြေးတယ်။ ပေါ်လီကျောင်းတစ်ပတ် က ၃ ကီလိုမီတာ ကွက်တိပဲဗျာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ August လလောက်ကစပြီး ကျနော်အပြင်မှာ ပြေးတဲ့ရက်က တစ်ပါတ်ကို ၂ ရက်ဖြစ်လာပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် မေလကစခဲ့တဲ့ ကျနော့် mission ကိုအောင်မြင်အောင် ကျနော်ခရီးသွားနေတဲ့ ကာလကလွဲလို့ တစ်ပါတ်က (၆) ရက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပါ။ တစ်ရက်ကို အနည်းဆုံး ၁ နာရီကနေ ၁ နာရီခွဲလောက်အထိကြာပါတယ်။ တင်္နလာနေ့ကတော့ ကျနော်အတော်သဘောကျတဲ့ workout ပါ။ ပေါ်လီတစ်ပါတ် ၃ ကီလိုမီတာပြေး၊ မီတာ ၁၀၀၀ ရေကူး ပြီး ၁၅ မိနစ်စက်ဘီးစီးတဲ့ triathlon ပါ။ ဒီ workout တစ်ခါလုပ်ရင် အနည်းဆုံး ၀.၃ ကီလိုကျပါတယ်။ နောက်တစ်ရက် အင်္ဂါနေ့ကို ကလပ်က Running Interest Group နဲ့ ၆ ကီလိုမီတာပြေးပါတယ်။ သူတို့ကတခါတလေ ၁၁ ကီလိုမီတာပြေးတာ၊ မှတ်မှတ်ရရ ၂ ခါပြေးဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် August လမှာတော့ ပြေးတဲ့ ဟာ နည်းနည်းလျှော့ချင်လို့ဆိုပြီး နာမည်ကြီး Fitness Club ဖြစ်တဲ့ Fitness First မှာ အသင်းဝင် ဖြစ်ပြီး၊ Group Aerobic Exercise တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Body Attack ကို Wednesday နဲ့ Saturday မှာ လုပ်ဖြစ် ပါတယ်။ Group Exercise ကို မြူးမြူးကြွကြွ သီးချင်းတွေနဲ့လုပ်ရတဲ့ အတွက် အတော်လေး သဘောကျ တယ်ပြောရမယ်။ အဲ့တာမလုပ်ခင်လေး အပြေးစက်ပေါ်မှာ ၁၅ မီနစ်လောက်ကြိုပြေးလိုက်ရင်တော့ ကယ်လိုရီ လောင်ကြွမ်းမှုပိုပြီး ဘော်ဒီဝိတ်ကျလာတာလဲ သတိထားမိပါတယ်။ ဒီဝိတ်ချတဲ့ ကာလတောက် လျှောက်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၀၁၅ အထိကျနော် အစားအသောက်ကို မလျှော့ချခဲ့ပါဖူး။ ကိုယ်စားနေကျအစားအစာ ကို ပဲ ပုံမှန်စားသောက်နေခဲ့တာပါ။ လုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတောက်လျှောက် မှာ ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်း တွေ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်၊ ကျလာတဲ့ ဘော်ဒီဝိတ်စတဲ့ အချက်အလက် တွေအကုန်လုံးကို မှတ်ထားခြင်း ဖြင့် ကျနော့်ရဲ့ weight lose mission ကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ခဲ့သည်ပေါ့။ နောက်တစ်ခု တစ်ကီလို တစ်ကီလို ကျတိုင်းမှာ ခံစားရတဲ့ ပီတိဖြစ်မှု၊ ဒီပီတိဖြစ်မှုများကို ဆက်ထိမ်းထားဖို့ ကုန်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ ကို နှမြောမှု တို့က ကျနော် ရှေ့ဆက်သွားဖို့ခွန်အားတွေပါပဲ။ မတ်လ မှာတော့ ကျနော့်ဘော်ဒီဝိတ်ဟာ ၇၈ ကီလိုကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ ၇၈ ကိုရောက်လာတဲ့ အခါ လုပ်နေကျ လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ ဝိတ်ကဆက်မကျတော့ပဲ အဲ့နေရာမှာပဲ တဝဲလည်လည် ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Diet စစ်ကူခေါ်ရပါတော့တယ်။ Weekend ကလွဲပြီး ညစာတွေအကုန် ကို အရွက်သုတ်တို့၊ Subway တို့ Macdonal Wrap တို့အပြင် တချို့ရက်တွေမှာ နေ့ခင်းစာ ကို အရွက်သုတ်၊ ကိုယ်တိုင်လုပ် အသားညှပ် ပေါင်မုန် နဲ့ ကြက်သားရင်ဖုံသားကို ပျားရည် ချက် တို့ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးစားသောက် Diet စစ်ကူခေါ်တဲ့ အခါမှာတော့ ခေါင်းမာနေတဲ့ ဘောဒီဝိတ်ဟာ ၇၅ ကီလိုဇုန်ထဲကိုကျဆင်းလာပါတယ်။ ကျနော့် မစ်ရှင်အဖြစ် ၇၅ ကီလိုအတိကို ရောက်ဖို့သိပ်မလိုတော့ပါဖူး။ ဒီမစ်ရှင်ပြီးရင်တော့ ၇၀ ကီလိုကို ခရီးဆက်နိုင်မနိုင် စဉ်းစားရအုံးမှာပါ။
လွန်ခဲ့နှစ် သြဂုတ်လ ကနေ စတင်မှတ်တမ်းတင်လာတဲ့ runkeeper app အရ မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှာတော့ ပြေးတာမကြိုက်တဲ့ ကျနော် ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ကျော်ပြေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုတလော တော့ တပါတ်ကို အနည်းဆုံး စာအတွက် ၁၅ ကီလိုမီတာက နေ အများဆုံး ၂၀ ကီလိုမီတာအထိပြေးဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ weight lose mission ကြောင့်ပြန်လည်စတင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျနော့်အားကစား ကဏ္ဍကြောင့် အနည်း ငယ်ချို့ယွင်းစပြုလာတဲ့ ကျနော့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ပြန်ပြီးကောင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်။ နှားစေးရောဂါ သိသိသာသာ ကြီးပျောက်သွားတဲ့အပြင် အိပ်ရေးပျက်တာတွေလဲ အများကြီးလျှော့ကျသွားပါတယ်။ အရင်လိုပင်ပန်းတွေတာတွေ လုံးဝမရှိတော့ပဲ အတော်လေးလန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်လာတာ လက်တွေ့ဆို တော့ ကျနော့်အလုပ်က HR Policy ထဲမှာ Active and Healthy Life Style activities တွေကို အကောင် အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းများရဲ့ MC rate ကိုလျှော့ချပြီး၊ ကျန်းမာရေးအသုံးစားရိတ်တွေလဲ လျော့ကျစေနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကျနော့် သူဌေးကိုပြောတော့ သူဌေးကိုယ်တိုင်ကလဲ တပါတ်ကို ၄ ရက် gym မှာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လေ့ရှိတာကြောင့် ကျနော့်ပေါ်လစီကို ချက်ချင်းပဲ အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ လမ်းညွှန်ပါတယ်။
အမိမြန်မာပြည်ကိုတော့ ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ holiday ကာလအတွင်းရောက်ခဲ့ပြီး ထုံးစံအတိုင်းဘာမှာထွေထွေ ထူးထူးတွေ ပြောင်းလဲလာတာမရှိပါဘူး။
ခရီးရှည်အဖြစ် လွန်ခဲ့တဲ့ မတ်လ တိုင်ဝမ်ကို ၁၀ ရက်ကြာအလည်အပတ်သွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ လေကြောင်း လိုင်းကိုတော့ ဈေးအသင့်အတင့် ဖြစ်တဲ့ EVA Air ကိုရွေးဖြစ်ပြီး ခရီးစဉ်ပျံသန်းမှုအတွင်း Entertainment နဲ့ အစားအသောက်ပိုင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းတွေ ကို စိတ်တိုင်းအကျကြီး မရှိခဲ့ပါဖူး။ တိုင်ဝမ်ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံး ကို ကျနော့်သူငယ်ချင်း ဘရမ်ဒမ်ကစီစဉ်တာဖြစ်ပြီး ခရီးစဉ်တခုလုံးနီးပါးဟာ private tour ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်ရပ်ချင်တဲ့နေရာ မှာ ရပ်၊ ကိုယ်စားချင်တာ အေးအေးဆေးဆေး စား၊ ဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတာကြောင့် တခါတလေ အလွန်နှေးလှပါလား ဟဲ့ ဆိုပြီးတောင် စိတ်ညစ်ရတဲ့အထိပါ။ မှတ်မှတ်ရရ တွေအဖြစ် တိုင်ဝမ် သမ္မတကိုယ်တိုင်နဲ့ နာမည်ကျော်ပုဂိုလ်များ ကိုယ်တိုင်ရောက်ဖူး စားသောက်ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ မီးကင်ကျောက် တုံး ကို ဟင်းရည်အိုးထဲနှစ်ထည့်ပြီး ချက်ပြုတ်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်ကို ရောက်ရှိစားသောက်ခဲ့ရပါတယ်။ Home Stay လို့ခေါ်တဲ့ မြို့ခံတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အိမ်တွေမှာ ညအိပ်ရပ်နားတာကြောင့်လဲ ဟိုတယ်တွေ မှာပဲ တည်းခိုနေထိုင်ခဲ့တာနဲ့မတူပဲ ထူးထူးခြားခြား အတွေ့အကြုံတစ်မျိုးပါ။
စင်္ကာပူတွင် (၉) နှစ်ကြာသောအခါ အပိုင်း (၂) မှာတော့ ဇွန်လတွင်းကျင်းပမည့် ၂၈ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲ ရဲ့ ရွက်လှေအားကစားယှဉ်ပြိုင်ရာ နေရာမှာ Asst Venue WorkForce Manager အနေနဲ့ လုပ်အားပေးခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာကြောင့် ဇွန်လ ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ စောင့်ဖတ်ပါလို့ ကြိုတင်အသိပေးရင်း အပိုင်း (၁) ကို နိဂုံးချူပ်ပါတယ်။ ဖတ်ပေးတဲ့ ကျနော့်ညီအကို မောင်နှမသူငယ်ချင်း အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ။
Posted by KO at 9:57 PM 1 comment:
မစ္စတာ လီကွမ်ယူ ၏ သေတ္တာနီ ... Mr. Lee's Red Box
မူရင်းဆောင်းပါး ဖြစ်တဲ့ Mr. Lee's red box ကို Mr. Lee ရဲ့ Principal Private Secretary (PPS)
ကိုယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ၁၉၉၇ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ ပြီး နောက်
ရာထူးအဆင့်ဆင့် တက်ကာ လက်ရှိ စင်္ကာပူနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီး အဖြစ်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ Mr. Heng Swee Keat က Mr Lee ကွယ်လွန်ပြီး ၁ ရက်အကြာမှာ မီဒီယာပေါင်းစုံကနေ ထုတ်ဝေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Mr. Lee ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာ မီဒီယာတွေ Facebook တွေမှာ အကောင်းအဆိုးတွေ ဝေဖန်ကြ။
တချို့ကလဲ အကောင်းရေးတဲ့ သူများကို အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းတို့၊ အဆိုးရေးတဲ့ သူများ ကိုလည်း
တလုတ်စားဖူးသူ့ကျေးဇူးဆိုတာ ရှိတယ်။ သူတည်ထောင်ခဲ့ပြီး တိုးတက်ခဲ့တဲ့နိုင်ခံမှာနေပြီး အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုး မျိုးမလုပ်ကြတဲ့ စသည်ဖြင့် ထုံးစံအတိုင်း ဂိုဏ်းဂနတွေ ကွဲပြားနေဆဲ ကာလဆိုတော့ ကျနော်လဲ ပြောခံရမှာဆိုးတာ နဲ့ ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အခုမှရေးဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းဆောင်းပါးက
ဆီလျော်အောင်ဘာသာပြန်ရေးတဲ့ အတွက်အမှားများပါခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ဖို့ ကြိုတင်တောင်းပန်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် Blog များနဲ့ facebook မှ ရှယ်မယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး Credit ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
သေတ္တာနီ ကို Mr Lee ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည့်အချိန်မှ စပြီး ဖေဖဝါရီလ ၅ ရက်နေ့ Mr. Lee နေမကောင်း
ဖြစ်ပြီး ဆေးရုံမတက်မီ ၁ ရက်အလိုအထိ Mr. Lee သုံးစွဲခဲ့သည့် သမိုင်းဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Mr Lee ကွယ်လွန်ပြီးနောက်သေတ္တာနီကို စင်္ကာပူအမျိုးသားပြတိုက်ရှိ Mr Lee ပြခန်းတွင်အများပြည်သူ
Mr. Lee မှာ သေတ္တာနီ တစ်လုံးရှိသည်။ မိမိ Mr Lee အတွက် ကိုယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးချူပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင် နေစဉ်ကာလ က ဒီ သေတ္တာနီနှင့် နေစဉ်နှင့် အမျှပတ်သတ်ခဲ့ရဖူးသည်။ Mr Lee ရုံးမတက် လာမီ မနက် ၉ နာရီခန့်တွင် သေတ္တာနီ ရုံးသို့ အရင်ရောက်လေ့ရှိသည်။ Mr Lee ဒီသေတ္တာနီကို နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးစွဲ ခဲ့သည်ကို Mr Lee နှင့် အလုပ်တူတူတွဲ လုပ်ခဲ့ဖူးသည့် အရာရှိကြီးငယ်များ မှတ်မိလောက် အုံးမည်ဟုမိမိထင်သည်။ တကယ်တော့ သေတ္တာနီသည် သေတ္တာပုံစံလေးထောင့် ပုံရှိပြီး ၁၄ စင်တင်မီတာခန့်ဗျက်ကျယ်သည်။ သေတ္တာနီ၏ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သေတ္တာနီကိုယခင်ကိုလိုနီခေတ်ကအင်္ဂ
လိပ်ဝန်ကြီးများ ရုံးတစ်ရုံးနှင့် တစ်ရုံး စာရွက်စာတမ်းများ ပို့ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး မိမိတို့၏
စင်္ကာပူဝန်ကြီးများ လည်းယခင်က အသုံးပြုဖူးသော်လည်း ယခုနောက်ပိုင်းနှစ်များ တွင် Mr Lee တစ်ဦး
တည်း သာသုံးစွဲတာ သတိထားမိသည်။ ၁၉၉၇ခုနှစ်က မိမိ Mr Leeထံတွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တော့ သေတ္တာနီကို စမြင်ဖူးသည်။ သေတ္တာနီလို့ခေါ်ပေမယ့် ဝိုင်အနီရောင်ရင့်ရင့်နှင့်ပိုတူပြီး ပါလီမန် ထဲကထိုင်ခုံအရောင်မျိုးရှိသည်။ ဒီသေတ္တာနီကို Mr Lee အလုပ်လုပ်သော အချိန်တိုင်းတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး သူ၏စာရွက်စာတမ်းများ၊ မိန့်ခွန်းအကြမ်းများ၊ ဖတ်စရာစာများ၊ မေးခွန်းများမေးရန်အတွက် အကြမ်းရေးမှတ်ထားသည့် မေးခွန်းများ၊ လေ့လာမှတ်သားမိသော အကြောင်းအရာများ၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ချက်များ ပါရှိလေ့ရှိပါသည်။ ဒီနှစ်ပိုင်းများတွင် Mr Lee သူ၏ ကိုယ်ရေးအထုပတ္ထိများ ရေးနေချိန်အတွင်း သေတ္တာနီသည် သူ၏ ရုံးနှင့် အိမ်ကို လွန်း ထိုးခေါက်ပြန်ပြေးပြီး စာရွက်စာတမ်းများ ပို့ဆောင်သည့် တာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့
သည်။ ထို့အပြင် Mr Lee ယခင်ကသုံးစွဲခဲ့သည့် အသံသွင်း တိတ်ခွေများ၊ နိုင်ငံခြားခေါင်းဆောင်များ နှင့် အဆက်အသွယ်ပြု လုပ်သည့် အကြောင်းအရာများ၊ စီးပွားရေးပျက်ကပ်သုံးသပ်ချက်များ၊ ဝန်ကြီးချုပ်အိမ် တော် ဝန်ထမ်းများအတွက် ညွန်ကြားချက်များ၊ ဒီထက်မက အမြန်လမ်းမကြီးများပေါ်မှာ သစ်ပင်များ အကြောင်း အထိပါဝင် လေ့ရှိသည်။ Mr Lee သည် မည်သည့်အကြောင်းအရာမဆို စေ့စေ့စပ်စပ် တိတိကျကျ လုပ်တက်သည့် အကြောင်း လူအများ သိကြသည့်အတိုင်း စင်္ကာပူမြို့အတွင်း သွားရင်းလာရင်း တွေ့မိသည့် သစ်ပင်ညိုး နွမ်းပြီး သေနေသည်ကအစ သေတ္တာနီအတွင်း က မှတ်စုတွင် ရေးမှတ်ပြီး အရေးတယူ
Mr Lee ပြောလာမည့်အကြောင်းအရာ များ ကို မိမိတို့ တခါမှကြိုတင်မှန်းဆလို့ မရနိုင်ခံပေ။ စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွင်း သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ့တစ်နေရာရာမှာ တစ်ခုခုဖြစ်သည့်အကြောင်းအရာ များဖြစ်နိုင်သည်။ သေခြာ
သော အချက်အနေနဲ့ ဖြစ်နေသည့်အကြောင်းအရာများ သည် သူ၏နိုင်ငံအတွက်၊ သူ့နိုင်ငံသားများအ တွက်သူများထက်ယှဉ်ရင် ရှေ့ကိုဘယ်လိုခြေတလှမ်းသာနေထိုင်ရေးတွေအတွက် သေတ္တာနီထဲတွင် ခိုင်မာသည့်စီမံကိန်း တွေရှိနေသည်။ သေတ္တာနီ Mr Lee ရုံးသို့ ရောက်ရှိသည်နှင့် Mr Lee ၏ အတွင်းရေးမှူးများ မှ Mr Lee အတိုချုပ်မှတ်ချက် ရေးထားသည်များ ကို အကျယ်တဝင့်ဖြစ်အောင် ပြန်ရေးပြီး သည်နှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန များကို ညွှန်ကြားချက်များ ပေးပို့ခြင်း၊ မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်းများ တို့ကို Mr Lee ရုံးမတက်လာမီအမြန်ဆုံးပြီးစီးအောင် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ အရှေ့တောင် အာရှ စီးပွားရေးပျက်ကပ်အတွင်း Mr Lee အိမ်မှ အလုပ်လုပ်နေစဉ်ကာလ သေတ္တာနီ သည် အိမ်နှင့် ရုံးအသွားအပြန်လုပ်ကာ စီးပွားရေးပညာရှင်များ၏ သုံးသပ်ချက်များ၊ စီးပွားရေးပညာရှင်များ နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး မှုများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့် တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့သည်။ မိမိ Mr Lee ထံတွင် အလုပ်လုပ်စဉ်အချိန်အတွင်း သူ၏နေ့စဉ်နံနက်စာသည် သူ့အိမ်အနီး စားသောက်ဆိုင်တန်းမှ ဂျိုင့်ဖြင့်သွားဝယ်သော အချိုရည်မဆမ်းထားသည့် ပဲနို့ခဲတခွက်ဖြစ်ပြီး၊ လက်ဖက်ရည် နှင့် ကော်ဖီကို နံနက်စာတွင်သုံးဆောင်လေ့မရှိပေ။ Mr Lee ရုံးတက်လာသည်နှင့် သူ့အရင်ရောက်နှင့်နေသော သေတ္တာနီအတွင်း မှ အကြောင်းအရာများ သည် သူပြန်လည်သုံးသပ်ရန် အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားလေ့ ရှိသည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ရက်က သူ့ပုံမှန်အချိန်ဇယားအတိုင်း အစဉ်လိုက်သွားတော့သည်။ ဖတ်စရာရှိသည်များဖတ်သည်၊ အီးမေလ်းများဖတ်ပြီး စာပြန်စရာရှိသည်များ ပြန်ပြီးသည်နှင့် အဲ့ဒီနေ့ အတွက် နိုင်ငံခြားနှင့် ပြည်တွင်းဧည့်သည်များ ကို လက်ခံတွေ့ဆုံလေ့ရှိသည်။ ကိုယ်ရေးအတွင်းမှူးချူပ် ဆိုသည်နှင့်အမျှ Mr. Lee K Y ဧည့်သည်များတွေ့ဆုံသည့်အခါတိုင်း အခွင့်ထူးရကာ အနားတွင် ထိုင် ပြီးနားထောင်ခွင့်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေး သို့မဟုတ် ဧည့်သည်လက်ခံတွေ့ဆုံပြီးသည်နှင့် မိမိကို ဘယ်လိုထင်လဲ လို့ ထင်မြင်ချက်မှတ်ချက်များမေးတက်သည့်အတွက် ပြောသမျှစကား တလုံးမကျန်ရအောင် နားထောင်မှတ်သား ရသည့်အတွက် မိမိအတွက် အများကြီးပညာဆည်းပူးနိုင်ခဲ့သည်။
ညနေပိုင်းအချိန်များကတော့ Mr. Lee K Y အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းအချိန်ပဲဖြစ်ပြီး မည်သည့်နေရာ ရောက် နေနေ လေ့ကျင့်ခန်းကို မပျက်မကွက် စည်းကမ်းထားပြီးလုပ်လေ့ရှိသည်။ အပြေးစက်ပေါ်တွင် ပြေးခြင်း၊ လှေလှော်စက်ဖြင့်လှေလှော်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း နှင့် လမ်းလျှောက်ခြင်းတို့ သည် သူလုပ်နေကျ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများပင်ဖြစ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်းလဲ ညနေ သတင်း ဒါမှမဟုတ် သူ့တရုတ်စာ စကားပြောလေ့ကျင့်ခြင်း ကိုနားထောင်လေ့ရှိသလို တခါတလေ လဲ ဖုံးများပြောလေ့ရှိသည်။ အသက် ၇၀ ကျော် ၈၀ နားနီးလာသည်နှင့် အမျှ ဇရာကြောင့်စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါတော့ သည့် နောက်
တွင်တော့ ရိုှးရှင်းသောကာယလေ့ကျင်းခန်းများ သာ လုပ်တော့ပြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝါရင့်ဝန်ကြီးအဖြစ်မှ အနားယူချိန် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်တော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချိန်တွင် အလုပ်ကိစ္စများ သိပ်မလုပ်တော့ ပဲပိုပြီး
လွတ်လပ်ပေါ့ပါးကာ သူ့ဘဝအကြောင်းအရာများ၊ ရီစရာ ဟာသလေးများကို သူ့ ကိုယ်ရံတော်များ၊ ဝန်ထမ်းများ ကိုပြောပြလေ့ရှိတော့သည်။
Mr. Lee K Y ညနေပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေပြီ ဆိုရင်တော့ မိမိတို့ ရုံးဝန်ထမ်းအပေါင်းတို့က အဲ့ဒီနေ့အတွက်လုပ်စရာရှိသည်များ၊ Mr. Lee K Y ဖတ်ရန်မှတ်ချက်ပေးထားသည့်စာများ၊ စသည့်ဖြင့် Mr. Lee K Y အိမ်စာလုပ်ရန်အတွက် သေတ္တာနီထဲ ကို အစီစီအရီရီ ပြန် ထည့်ကြရသည်။ တခါတယံ သေတ္တာနီထဲ ထည့်စရာများ မပြီးသေးသည့်အတွက် သူ့ကိုယ်ရံတော် အရာရှိကို နောက်တခေါက်ပြန်လာယူခိုင်းကြရသည်။ Mr. Lee K Y ၏ ဇနီးသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်က ညနေပိုင်းတွင် Mr. Lee K Y ရုံးခန်းရှိရာ သမ္မတနန်းတော်အတွင်း ရှိ ဝန်ကြီးချူပ်ရုံး ကိုလာရောက်ပြီး Mr. Lee K Y နှင့်အတူတကွထိုင်ကာသူတို့ နှစ်ဦးစလုံးနှစ်သက်သဘောကျသည့် သမ္မတနန်းတော် အတွင်ရှိသစ်ပင်များကို ကြည့်ရှုစကားစမည်ပြောလေ့ရှိသည်။ သူတို့ဇနီးမောင်နှံပြောကြသည့်စကာ များမှာ အခြား ဇနီးမောင်နှံတွေပြောသလိုပဲ ဒီကနေ့ညစာတော့ ဘာစားကြရင်ကောင်းမလဲ၊ သူ့တို့မြေးတွေ ဘာတွေလုပ်နေကြတယ် စတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲ ဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီနောက်တော့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံ အိမ်သို့ပြန်ချိန်တွင် သေတ္တာနီလဲ အတူတကွပါသွားတော့သည်။ အိမ်တွင်ညစာစားပြီးသည် နှင့် သူတို့ဇနီးမောင်နှံ အေးအေးလူလူ လမ်းလျှောက်လေ့ရှိပြီး၊ Mr. Lee K Y ဝန်ကြီးချူပ်ဘဝ သန်တုံးမြန်တုံးကာလများတွင် သူ့ဇနီးက လမ်းလျှောက်လေ့ရှိပြီး Mr. Lee K Y က တော့ စက်ဘီးစီးလေ့ရှိသည်။ သူစီးသည့် စက်ဘီးကို မြင်လျှင် လူအများလက်ဖျားခါလေ့ရှိပြီး အလွန်ရှေးကျနေပြီဖြစ်သော စက်ဘီးဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီစက်ဘီးကို အသစ်လဲလိုက်သည်ဟု ဘယ်သူမှ မမြင်ဖူးကြပေ။ Mr. Lee K Y အသက်အရွယ်ကြောင့် အားနည်းလာအခါကျမှ သူသည် အဲ့ဒီစက်ဘီးကို အစီးရပ်လိုက်ပေတော့သည်။
Mr. Lee K Y ညစာအပြီး အေးအေးလူလူ လမ်းလျှောက်ပြီးသည်နှင့် သူအလုပ်ပြန်စလုပ်ရန် ရုံးမှပြန်ယူလာသော သို့မဟုတ် ပို့လိုက်သော သေတ္တာနီကို ဖွင့်တော့သည်။ သူ့အလုပ်ခန်းအဖြစ် စာကြည့်ခန်းကိုအသုံး
ပြုပြီး ယခင်ကတော့ သူ့သားအကြီးဆုံး လီရှန်လွန်း (လက်ရှိဝန်ကြီးချူပ်) ၏အိပ်ခန်းဖြစ်သည်။ သူ့စာကြည့်ခန်း သို့မဟုတ် အလုပ်ခန်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းသော ပရိဘောဂများဖြင့်သာ ဆင်ယင်ထားပြီး၊ အလုပ်စားပွဲသည် သစ်သားစားပွဲဟောင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ စားပွဲမျက်နာပြင်ကို မှန်သားပြင်အုပ်ထားပြီး အတွင်းတွင် မိသားစုဓာတ်ပုံများ၊ သာအကြီး ဝန်ကြီးချူပ်လီရှန်လွန်း စစ်မှုထမ်းကာလဓာတ်ပုံများ ထည့်ထားသည်။ Mr. Lee K Y ဇနီးရှိစဉ်ကတော့ သူ အလုပ်လုပ်နေစဉ် သူ့ဇနီးက စာဖတ်ရင်းစောင့်ပေးလေ့ရှိသည်။ Mr. Lee K Y ဝန်ကြီးချူပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလ များတွင် သူ၏ အိပ်ချိန်သည် နံနက် ၃နာရီခွဲ ဖြစ်ပြီး၊ စီနီယာဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလများတွင်တော့ နံနက် ၂ နာရီတွင် အိပ်လေ့ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်များမှ ပြန်လာသောရက်များတွင်တော့ သူ၏အိပ်ချိန်ကို နံနက် ၁ နာရီမှ ၂ နာရီအတွင်းသတ်မှတ်ထားလေ့ရှိသည်။ စင်္ကာပူမြိုကြီး အိပ်မောကျချိန်များတွင် တော့ Mr. Lee K Y အတွက် ပုံမှန်အလုပ်ချိန်များပင် ဖြစ်နေသည်။ Mr. Lee K Y အိပ်ယာသို့မဝင်မီ သူလုပ်စေချင်သည့် ညွှန်ကြားချက်များ၊ မှတ်ချက်များ စာရွက်စာတမ်းများ အားလုံးကို သေတ္တာနီ အတွင်းအစီစီအရီရီ ထည့်သွင်းပြီးနောက် သော့ခတ်ကာ သူ၏စာကြည့်ခန်းအပြင်တွင် ချ ထားပေးပြီးနောက် သူ့တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းများ ပြီးဆုံးတော့သည်။ နံနက်တွင်တော့ အဲ့ဒီနေ့အတွက်တာဝန်ကျ သည့် ကိုယ်ရံတော် အရာရှိက သေတ္တာနီကို သူ့ရုံးသို့ ပို့ဆောင်ပြီး နေ့သစ်တစ်ရက် စတော့သည်။
သေတ္တာနီအတွက် မှတ်မှတ်ရရ များအနေဖြင့် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် Mr. Lee K Y နှလုံးခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ်ရသည်။ ၂ လအတွင်း ဒုတိယမြောက်ခွဲစိတ်ကုသမှုဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ခွဲစိတ်မှု မှာ မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ခွဲစိတ်အပြီး သူ့ကို အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်အတွင်း စောင့်ကြည့်နေပြီးနောက်၊ မေ့ဆေးပြယ်ပြီး ပြန်လည်သတိရလာသည်နှင့် သူ့ကိုယ်ရံတော်အရာရှိကို ခေါ်တော့သည်။ ကိုယ်ရံတော်အရာရှိ အလောတကြီး
ပြေးဝင်ပြီး ဘာအလိုရှိပါသလဲ မေးတော့ " သေတ္တာနီယူခဲ့ပေးမလား ?" တဲ့။ ICU ထဲရောက်နေတဲ့ ကာလထဲမှာတောင် မေးတဲ့ သေတ္တာနီ ကို အရာရှိက အလျှင်အမြန်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့ နောက်၊ အလုပ်လုပ်ရအောင်ထားခဲ့လို့ ပြောတယ်။ အဲ့ဒီတုံးက Mr. Lee K Y အသက် ၇၂ နှစ်ပါ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာတော့ Mr. Lee K Y ရင်ဖက်ကို ပိုးဝင်တဲ့ရောဂါကြောင့် ဆေးရုံတက်နေစဉ်ကာလအတွင်း သူ့ချစ်ဇနီး ကွယ်လွန်ရှာပါတယ်။ သူ့ဇနီးကွယ်လွန်ကြောင်း ပြောပြီးချိန်မှာတော့ သူထနိုင်သည်နှင့် အသုဘအခန်းအနား
ပြင်ဆင်ထားရာ ဝန်ကြီးချူပ်အိမ်တော် သို့သွားတော့သည်။ သူ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် ဆေးရုံကို ဆရာဝန်၏ညွှန်ကြားချက်ကြောင့် ပြန်ရချိန်တွင် သူ့ကိုယ်ရံတော်အရာရှိကို ဆေးရုံမသွားသေးပဲ စင်္ကာပူ
မြစ်ကမ်း ပို့ပေးလို့ ညွှန်ကြားပါတယ်။ ညနက်သန်းခေါင်အချိန်မှာ Mr. Lee K Y တစ်ယောက် သူ့ချစ်ဇနီးအတွက် ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေရသည့်အတွက်သူ့ချစ်ဇနီးနဲ့အတူ လမ်းတူတူလျှောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြစ်ကမ်းဘေးမှာ သူတစ်ယောက်ထဲလမ်းလျှောက်နေချိန်မှာတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းကပဲ စောင့်ရှောက်နေပါတယ်။ တစ်နေရာအရောက်မှာတော့ Mr. Lee K Y လမ်းလျှောက်နေရာကနေ ရပ်လိုက်ပြီး ကိုယ်ရံတော်ကို လပ်ယပ်လှမ်းခေါ်ပြီး မြစ်ထဲက အမှိုက်စတွေ မြောနေတာကို လှမ်းပြပြီး " အဲ့တာတွေ ကို ဓာတ်ပုံလှမ်း ရိုက်ပေးပါလား... မနက်ဖန်ငါ့ အတွင်းရေးမှူးချူပ်ကိုဘာလုပ်ရမယ် ဆိုတာ ပြောလိုက်မယ် " ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသည်နှင့် ဆေးရုံကို ပြန်တော့သည်။
Mr. Lee K Y အနေဖြင့် စင်္ကာပူမြစ်သာယာလှပရေး ကို သူ ဝန်ကြီးချူပ်အဖြစ်တာဝန်ယူစဉ်ကာလက ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒီမြစ်ထာဝစဉ်သန့်ရှင်းသာယာစေဖို့ အချိန်နှင့်အမျှတွေးတော့နေပုံရသည်။ သူ့ကျန်းမာရေးကြောင့် ဆေးရုံသို့ပြန်ရတော့မည့်ဆဲဆဲ၊ ချစ်ဇနီးကွယ်လွန်ခြင်း အတွက် ပူဆွေးသောကရောက်နေရချိန်မှာတောင် ဒီမြစ်ထဲက အမှိုက်ကိုသတိရနိုင်သေးသော သူ ၏ စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြမှုကို အလွန်ပဲ ချီးကြူးမိသည်။ အဲ့ဒီညက ရိုက်ခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံများသည် နောက်တစ်နေ့ နံနက်တွင် သေတ္တာနီအတွင်း မှ သက်ဆိုင်ရာဌာနများ ကို လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဆင့်ကဲပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
Mr. Lee K Y ၏ ဈာပန ကို နိုင်ငံတော်အဆင့်အဖြင့် နိုင်ငံတော်ဈာပနအခန်းအနားကျင်းပခဲ့ပြီး၊ စင်္ကာပူသမိုင်းတွင် အကြီးကျယ်ဆုံး ဈာပနအဖြစ်ကျင်းပခဲ့သည်။ Lying in State ဟုတ်ခေါ်သည့် ပါလီမန် အဆောက် အအုံအတွင်းအများပြည်သူများ နောက်ဆုံးဂါရဝပြုရန်အတွက် ထားရှိရန် နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချူပ်အိမ်တော်မှ Mr. Lee K Y ၏ ရုပ်ကလပ်ကို သယ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးနောက် ပထမဆုံး ရုပ်ကလပ် အစောင့် အရှောက်အဖြစ် စင်္ကာပူနိုင်ငံ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ် ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ပါဝင်ပြီး ကြည်းတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်၊ ရေတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ်၊ လေတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချူပ် နှင့် စစ်ဦးစီးအရာရှိချူပ် တို့မှ ဂုဏ်ပြုစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပြီး၊ ကျန် ၅ ရက် တွင်လဲ ၂၄ နာရီပါတ်လုံး ရဲတပ်ဖွဲ၊ မြိုပြကာကွယ်ရေး၊ ကြည်းရေလေ တပ်မတော်အရာရှိကြီးငယ်များမှ ဂုဏ်ပြုစောင့်ရှောက် ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အများပြည်သူတို့ ဂါရဝပြုရန်ထားရှိရက်အတွင်း လူပေါင်း ၄သိန်း၅သောင်းခန့်နောက်ဆုံးဂါရဝပြုခဲ့ကြပြီး၊ နိုင်ငံတော်ဈာပန အခန်းအနား ကျင်းပရန်အတွက် ပါလီမန်အဆောက်အုံမှ အမျိုးသားတက္ကသိုလ် ယဉ်ကျေးမှုစင်တာသို့ ပို့ဆောင်ရာတွင်လည်း မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေသည့်ကြားမှ လူပေါင်း ၁ သိန်းခန့်စောင်
့ကြို ပြီးနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါသည်။ ပါလီမန်မှ စတင်ထွက်ခွာ ချိန်တွင် အမြှောက် ၂၁ ချက်ပစ်ဖောက်ခဲ့ပြီး၊ အစီအစဉ်အရ လေတပ်မတော် မှာ Black Knight တိုက်လေယာဉ် (၄) စင်းမှ ကောင်းကင်မှ ပျံဝဲအလေးပြုကာ " Missing Man Formation" ကို ဖော်ဆောင်ရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း မိုးရွာသွန်းနေပြီး မြင်ကွင်းမရှင်းလင်းခြင်း လေယာဉ်များဟာ တိမ်လွှာအထက်မှ ပျံသန်းနေရခြင်းကြောင့် Formation ကို မဖော်ဆောင်ခဲ့ပဲ ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းခြင်းဖြင့် သာ Mr. Lee K Y ကို နောက်ဆုံးအလေးပြုနှုတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ Missiong man formation သည် အထူးဈာပန အခန်းအနားများတွင် အသုံးပြုသည့် လေကြောင်းအလေးပြုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၃၂ ခုနှစ်မှစတင်အသုံးပြုခဲ့ သည်။ V ပုံစံပျံသန်းမှုဖြစ်ပြီး အုပ်မှူးမှာ လေယာဉ်အုပ်စု၏ ရှေ့ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်နေရာယူပျံသန်း ပြီး ကျန်လေယာဉ်များက နောက်မှ လိုက်ပျံသန်းမှုပုံစံဖြစ်သည်။
Mr. Lee K Y ကို Mandai သုသာန်တွင် မိသားစုဈာပန အဖြစ်ကျင်းပ မီးသဂြိုလ်ခဲ့ပြီး သူ၏ မကွယ်လွန်မီ ညွှန်ကြားချက်အရ သူ၏အရိုးပြာများ ကို သူ့ချစ်ဇနီးအရိုးပြာများဖြင့် ရောစပ်ထားပေးပြီး နောက် Mr. Lee K Y တစ်ယောက်ကောင်းမွန်ရာဘုံဘဝ တွင် ကောင်းမွန်စွာအနားယူနိုင်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းလျှတ် .....
Posted by KO at 10:09 PM No comments:
ကျနော် နှင့် ဂျပန်ခရီး ၂၀၁၄
အခုလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Company မှာ အလုပ်ဝင်ပြီးတဲ့နောက် စာမရေးဖြစ်ခဲ့တာ အတော်ကိုကြာခဲ့ပါပြီ။ ပုံမှန်အားဖြင့် ခရီးထွက်တဲ့ အကြောင်းတွေကို အကျယ်တဝင့်ရေးလေ့မရှိပေမယ့် အခုသွားခဲ့တဲ့ ဂျပန်ခရီးက ကျနော့်အတွက် ထူးထူးခြားခြား လေးတွေရှိတာကြောင့် ကျနော့်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဖတ်ရအောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီခရီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိခဲ့ပဲ ၂၀၁၄ တရုတ်နှစ် သစ်ကူးကိုတော့ စင်္ကာပူမှာပဲ နေဖြစ်မယ်လို့ စဉ်းစားပြီးကာမှ ရုံးကပိတ်ရက်ကို အကြာပြီးရက်ရှည်ပိတ်လိုက်တာ ကြောင့် ၁ လလောက်အလိုမှာ ကောက်ကာငင်ကာ နဲ့ စီစဉ်လိုက်ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Delta Airlines ကလဲ ဈေးလျော့တာကြောင့် ရုံးမှာ ခွင့်တောင်မတင်ရသေးပဲ လက်မှတ်ဝယ်လိုက်ပြီး ခွင့်တစ်ရက်အတွက် သူဌေးနဲ့ အတော်လေး စကားပြောဆိုလိုက်ရပါ တယ်။ ခရီးသွားမယ့် ကာလက ဂျပန်မှာ အအေးဆုံးရာသီဥတု ဖြစ်နေတာကြောင့် ကျနော်နဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်သား အေးဒဏ်ခံနိုင်ဖို့ အဝတ်အစား တွေကအစ အတော်လေးပြင်ဆင်လိုက်ရတယ်။ သွားမယ့် ခရီးစဉ်ကို တိုကျိုမြို့မှာ အဝင် ၂ ည အိပ်၊ နှင်းလျှောစီးတာမလုပ်ဖူးတာရယ်၊ နှင်းကို မမြင်ဖူးလို့ သွားကြည့်ချင်တာရယ်ကြောင့် တိုကျိူမြို့တော်ကနေ ကီလိုမီတာ ၂၈၀ လောက်ဝေးတဲ့ ဂျပန်မြောက်ပိုင်း က Nagano မြို့နားမှာ ရှိတဲ့ Nozawa Onsen Ski Resort မှာ ၁ ည၊ ကျိုတိုမြို့တော်မှာ ၁ ညနဲ့ စင်္ကာပူမပြန်ခင် တိုကျိုမှာ ၁ ည အားလုံးပေါင်း ၅ ညအိပ် ၆ ရက်ခရီးဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တွေတစ်ခုနဲ့ တစ်ခု သွားရလာရမှာ ဆိုတော့ ဂျပန်ရဲ့ အဓိက Transportation ဖြစ်တဲ့ ရထားနဲ့ပဲခရီးသွားမယ် စိတ်ကူးတော့ စင်္ကာပူကထွက်ခင်မှာပဲ Japan Rail Pass လို့ခေါ်တဲ့ JR Pass ကို (၇) ရက်အတွက် ကြိုဝယ်ထားလိုက် ပါတယ်။ online ကနေပဲ အော်ဒါမှာလိုက်ပြီး ၂ ရက်အတွင်းမှာ FEDEX နဲ့အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်။ Japan Rail Company လက်အောက်က ကျည်ဆံရထားတွေ အပါအဝင်၊ ရထားလိုင်းအားလုံးကို (၇) ရက်ကြာ ကြိုက်သလောက်စီးလို့ရတဲ့ လက်မှတ်ပါ။ ဈေးနှုန်းက မသက်သာပေမယ့် သွားရမယ့် ခရီးတွေမှာ ကျည်ဆံရထားအသုံးများတာကြောင့် ပြန်တွက်ကြည့်လိုက်ရင် ကိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။
ဂျပန်ခရီးစဉ် ကို ဖေဖဝါရီလ (၄) ရက်နေ့မှာ စထွက်ဖြစ်ပါတယ်။ မနက်အစောကြီးလေယာဉ်ခရီးစဉ်
ဖြစ်တာကြောင့် ချန်ဂီကို ၄ နာရီလောက်ရောက်ပြီး Delta Airlines Counter မှာ Check in ဝင်ဖို့လုပ်တော့ အရင်တုံးက Check In ဝင်တဲ့ ပုံစံနဲ့မတူထူးထူးခြားခြား တစ်ခုက ကောင်တာမှာ Check in မဝင်မီမှာ Private Security Company တစ်ခု က Security Officer တွေက ခရီးသည်တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ e-ticket ကို တောင်းကြည့်တယ်၊ ဘယ်သွားမှာလဲ ? အလုပ်ကိစ္စလား၊ အပျော်ခရီးလား၊ ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမှာလဲ၊
ခရီးဆောင်အိတ်ကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပိုးတာလား၊ တစ်ယောက်ယောက်က လူကြုံထည့်ပေးလိုက်တာ ရှိလား၊ စင်္ကာပူမှာ ဘာအလုပ်လုပ်တာလဲ စတဲ့မေးခွန်းတွေကို မေးတဲ့အပြင် သူတို့ရဲ့ Check List မှာပါထည့်ရေးတာကို တွေ့ရတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလို မေးမြန်းစစ်ဆေးတာလဲ ဆိုတာတော့ ကျနော်က American Airlines တစ်ခါမှ မစီးဖူးတာကြောင့် မသိဘူး။ အမေရိကန် လေကြောင်းလိုင်း တစ်ခုကြောင့် လုံခြုံရေးပိုမိုတင်းကြပ်တယ်လို့ထင်တာပါပဲ။ Delta Airlines ရဲ့ မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှုဟာ စီးဖူးသမျှ လေကြောင်းလိုင်းတွေအားလုံးထဲက အကောင်းဆုံးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ Check In Procedure နှုတ်ဆက်တာ၊ ဘာညာဟာ SQ Ground Service ထက်အများကြီးသာပါတယ်။ မနက် ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ်မှာ ချန်ဂီက ထွက်လာတဲ့ ကျနော်တို့လေယာဉ်ဟာ တိုကျို Narita Airport ကို ဂျပန်စံတော်ချိန် ၁ နာရီ ၃၀ မှာဆိုက်ပါတယ်။ Narita Airport ဟာ ကျနော်မျှော်လင့်ထားသလို အပျံစားကြီးမဟုတ်တော့ နည်းနည်းတော့ အံသြသွားတယ်။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး လေဆိပ်ကြီးတွေ ဖြစ်တဲ့ Changi International၊ Hong Kong Int'l နဲ့ Inchong Int't ထဲမှာ Inchong ကို မရောက်ဖူးတော့ မနှိုင်း ယှဉ်တက်ပေမယ့် လောလောဆယ်အထိကတော့ ချန်ဂီ လေဆိပ်က ကျနော့်အတွက် အကောင်းဆုံးလေဆိပ်တစ်ခုပါပဲ။ ဂျပန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဟာ မျှော်လင့်ထားသလို မဟုတ်ပဲ အသက်ငယ်ငယ် Officer တွေ ပဲ များပါတယ်။ မျက်နာ က တင်းပေမယ့် နှုတ်ဆက်
ဖော်တော့ ရပါသေးတယ်။ ဘာအပိုတစ်ခုမှ မပြောပဲ၊ လက်ဗွေယူတာ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ပြီး ၃ မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ ကိစ္စပြီး သွားပါတယ်။ အကောက်ခွန်နေရာရောက်တော့ Green Channel က ဖြတ်ပေမယ့် အသက်ငယ်ငယ် မိန်းကလေး အရာရှိက အလွန်မျက်နာ ပြုံးချိုစွာနဲ့ ပါတ်စ်ပို့ကိုတောင်းကြည့်ပြီး ဘာတွေပါလဲ လို့မေးတယ်။ ဘာ မှမပါဘူးပေါ့၊ အဝတ်အစားတွေပဲ ပါပါတယ်ဆိုတော့ အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရမလားတဲ့၊ ရပါတယ်ပေါ့ မရဖူးပြောလို့မှမရတာ။ အိတ်ကို ဖွင့်ကြည့်ပြီး တိတိကျကျ ကို ရှာဖွေပါတယ်။ အိတ်ထဲမှာ နည်းနည်းရှုပ်ပွသွား တာကို သေသေခြာခြာ ပြန်စီပြီးပိတ်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ တခြားကောင်တာ မှာ အစစ်ခံနေတဲ့ ကျနော့် သူငယ်ချင်း အိတ်ကို ဖွင့်ကြည့်ချင်လို့ သော့ က ကျနော့်စီမှာ ရောက်နေတော့ အရာရှိတစ်ယောက်က လာတောင်းတာနဲ့ ပေးလိုက်ရသေးတယ်။ ၂ ယောက်လုံး clear
ဖြစ်ပြီးတော့ အချိန်လေး နည်းနည်းရတာနဲ့ Narita Terminal2ဖက်မှာ Free Wifi Card ပေးတဲ့
ကောင်တာကို Shuttle bus စီးပြီးသွား ရှာ တာမတွေ့တဲ့နောက်တော့ Pocket Wifi လို့ခေါ်တဲ့ Device
လေးကို ၆ ရက်အတွက် စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ ၇၀ ပေးပြီး ဌားလာလိုက်ရတယ်။
စင်္ကာပူက ဝယ်ထားတဲ့ JR Pass ရထားလက်မှတ်ကို ဂျပန်ရောက်မှ စီးလို့ရတဲ့ ကဒ်ပြားလဲရတာဆိုတော့ ရထားလက်မှတ်ကောင်တာ မှာ နာရီဝက်လောက်တန်းစီပြီး လက်မှတ်ကိုလဲ၊ သွားမယ့် ခရီးတောက်လျှောက်ကို ထိုင်ခုံတွေ reserved တစ်ခါထဲလုပ်လိုက်ပါတယ်။ Narita Airport ကနေ တိုကျိုမြို့ထဲကို Narita Express လို့ခေါ်တဲ့ ရထားတစ်စင်းနဲ့ ၁ နာရီလောက်ကြာအောင် စီးပြီးတဲ့နောက်တော့ တိုကျို ရထား
ဘူတာကြီးကို ချောချောမောမော ပဲ ဆိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေ စင်္ကာပူက MRT လိုရထားဆက်စီးပြီး တည်းမယ့် ဟိုတယ်ကို သွားတော့ မြေအောက်ကနေ မြေပေါ်ကို တက်တော့ နှင်းကျနေတာကို ပထမဆုံး တွေ့ဖူးလိုက်ပါတယ်။ နှင်းနဲ့ မိုးဖွဲလေး ရောပြီးကျနေတဲ့ အနေအထားပါ။ ကိုယ်ကိုကိုယ်ပို လုံခြုံအောင်ဝတ်ပြီး
တော့ ဟိုတယ်ကို လမ်းလျှောက်မယ့် လမ်းကြောင်းကို ဖုံးနဲ့ကြည့် မြေပြင်က အမှတ်အသားတွေ ကြည့်လိုက်တော့ ကံကောင်းစွာနဲ့ ဟိုတယ်က လမ်းဖြတ်ကူးပြီး ၁ မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်လိုက်ရုံနဲ့ ရောက်တဲ့ နေရာမှာ တွေ့ရတော့ အတော်ပျော်သွားတယ်။ နှင်းဖွဲဖွဲကြားကနေ လမ်းအကြာကြီး မလျှောက် ရတော့ ဖူးပေါ့။ ဟိုတယ်ရောက် Check In ဘာညာလုပ်ပြီး အခန်းကို တက်သွားတော့ တွေ့ဖူးသမျှ၊ နေဖူးသမျှ ဟို
တယ်အခန်းတွေထဲက အသေးဆုံး အခန်းလေးပါပဲ။ ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာ ရှိသင့်ရှိထိုက် တဲ့ ပစ္စည်းပစ္စရ Facility အပြည့်အစုံကို တော့ သူ့နေရာနဲ့သူသပ်သပ်ရပ်ရပ် လေး ရှိနေပါတယ်။ ဟိုတယ်မှာ Onsen လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်ပုံစံ ရေချိုးကန်က ဟိုတယ် ရဲ့ ၂ ထပ်မှာ ရှိတော့ ရေနွေးလေး သွားစိမ်လိုက် တာ ခရီးပန်းတာအတော်လေး သက်သာသွားပါတယ်။ အပြင်မှာ နှင်းကျ တာရပ်သွားတော့ နောက်တော့ (၂) ယောက်သား လုံလုံခြုံခြုံ လေးဝတ်စားပြီး ပထမညကို Ginza Area ဖက်လမ်းလျှောက်သွားဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယနေ့မနက်ပိုင်းတော့ရာသီဥတုက သာသာယာယာရှိတာကြောင့် ဟိုတယ်က နေ 1 ကီလိုမီတာ
ကျော်ကျော်လေးဝေးတဲ့ Tsukiji Fish Market ကို လမ်းလျှောက်သွားပြီး အဲ့ရောက်တော့ သွားတာ
နောက်ကျသွားလို့လား၊ Holiday ကြောင့်လား မသိဘူး ပိတ်တယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့ ပထမဆုံး visit ကတော့ မအောင်မြင်လိုက်ပါဖူး။ အဲ့ဒီမှာ မနက်စာစားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတော့ ပိတ်တာတာနဲ့တိုးနေတာ နဲ့ ဘယ်နေရာမှာ ဘာစားရမှန်းမသိပဲ ယောင်ဝါးဝါး ဖြစ်ပြီး တဲ့နောက် 7-11 လိုဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်တွေ့တာနဲ့ ဝင်ပြီး ဆူရှီလေး တစ်ဗူးရယ်၊ ကော်ဖီရယ်ဝယ်ပြီး ဗိုက်ကဆာနေတာနဲ့ဆိုတော့ လမ်းပေါ်မှာ ပဲ ၂ ယောက်သား မတ်တက်ရပ်စားလိုက်တယ်။ ဂျပန်ဟာ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အမှိုက်ပုံးကို နေရာတိုင်းမှာ မထားပေးထားပဲ၊ recycle bin တွေပဲ တော်တော်များများ တွေ့ရပါတယ်။ အမှိုက်ပုံးမရှိတော့ အမှိုက်က
မပြစ်ရပဲ လက်ကနေတန်းလန်းကိုင်ထားရတော့ အတော်လေးခက်တယ်။ အဲ့ဒီကနေ တိုကျိုဘူတာကြီးကို ရထားစီး၊ အဲ့ဒီကနေတဆင့် ရထားထပ်စီးပြီး Meiji Shrine ကို သွားပါတယ်။ Meiji Shrine ကတော့
လွယ်လွယ်ကူကူ နဲ့ ရှာတွေ့ပြီး ဝင်ပေါက်ကနေ အထဲကို အတော်လေး လမ်းလျှောက်ဝင်ရတယ်ဗျ။ အဲ့ဒီကနေပြန်တော့ အနီးတဝိုက်လမ်းလျှောက်ကြည့်ပြီး မြေအောက်ကစားသောက်ဆိုင်လေး မှာ နေလည်စာ စားဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်က သိပ်မကောင်းရတဲ့ အထဲ စားသောက်ဆိုင်တွင်း ဆေးလိပ်သောက်ခွင့်ပြုထားတော့ မီးခိုးမွှန်တာကြောင့် ခပ်မြန်မြန်ပဲစားပြီးလိုက်ရတယ်။ အဲ့တာမျိုးလေးတွေ ကျ တော့ စင်္ကာပူ
ဥပဒေ ကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ နောက်တစ်နေရာ ဆက်သွားတာကတော့ တိုကျိုရဲ့ နာမည်ကျော် Electronic ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ shopping mall များစုဝေးရာ Akihabara ဖက်ကိုပါ။ ကိုယ်ပဲ ဝယ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတာလား၊ ဈေးပဲ ကြီးနေတယ်လို့ ထင်လို့လားမသိ ဘာမှထွေထွေထူးထူး မဝယ်လာဖြစ်ပါဖူး။
ဂျပန်ရဲ့ အိမ်သာတိုင်းလိုလို မှာ ရှိတဲ့ အိမ်သာကမုတ်မှာ တက်ထားတဲ့ ရေဆေးတဲ့ toilet seat ကို တော့ ဝယ်ချင်လို့ လိုက်ရှာပေမယ့် မတွေ့ဖြစ်ပါဘူး။ Akihabara ကနေတော့ Shinjuku ဖက်ကို ဆက်သွားပြီး ညစာစား လမ်းလျှောက်လိုက်ကြည့်ပြီး ဟိုတယ်ပြန်နားဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တော့ ခရီးစကထဲ က ဖျားချင်ချင်ဖြစ်နေတဲ့ ခရီးသွားဖော်သူငယ်ချင်းက အပြင်းအထန် ဖျားပြီး ကိုယ်တွေ အရမ်းပူလာတာကြောင့် ဟိုတယ် reception ကို ဆရာဝန်အနီးမှာ ရှိလားမေးတော့ communication က ပြသနာတက်နေတာနဲ့ အနီးဆုံးဆေးရုံ ဘယ်နားမှာ ရှိလဲဆိုတော့ ဆေးရုံမြေပုံကို ကွန်ပြုတာကနေ print ထုတ်ပေးတယ်။
အခန်းပြန် အဝတ်အစား တွေ အထပ်ထပ်ဝတ်ပြီး ည ၁၁ နာရီလောက်ဆိုတော့ Taxi ပဲဌား ပြီး အနီးဆုံး
ဆေးရုံကို ၂ ယောက်သားပြေးကြရတယ်။ အနီးဆုံးဆေးရုံက ကံကောင်းချင်တော့ တကယ့်ကို အနီးလေးပါ၊ Taxi မီတာ Flag Down Rate အတွင်းမှာပဲ ရောက်ပါတယ်။ ယန်း ၇၀၀ ကျော်ဆိုတော့ စင်္ကာပူ ၈ ကျပ်ကျော်ဆိုတော့ အတော်ဈေးကြီးတယ်ပြောရမှာပေါ့။ ဆေးရုံကလဲ International Hospital Private Hospital ဆိုတော့ ဘာသာစကားအခက်အခဲ အတော်လေးနည်းပါတယ်။ ညလည်ကောင် ဆို တော့ လူနာကလဲ မရှိတော့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပဲ ကုသပေး၊ ဆေးထုတ်နဲ့ ည ၁၂ နာရီခွဲလောက်မှာ ကိစ္စပြီးသွားပါတယ်။ Bill တောင်းတော့ ယန်း ၃၇၀၀၀ ကျပါတယ်။ ပထမ ၃၇၀၀ လို့ထင်လို့ တယ်သက်သာ ပါလားဟဲ့ လို့ထင်မိတာ။ Accident & Emergency Service ကို စင်္ကာပူ ၄၅၀ ကျော်ကျတယ်ဆိုတော့ စင်္ကာပူ
A & E ငွေ ၁၀၀ ယူတာကို ဈေးကြီးတယ်လို့ မပြောလိုတော့ ပါဘူး။ Travel Insurance ဝယ်ထား တော့
ပြသနာ သိပ်မရှိလိုက်ဖူးပေါ့။ Insurance က ပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ငွေ က မနေ့ကမှ approved ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားလာတယ်။
တတိယနေ့ အစီအစဉ်ကတော့ တိုကျိုကနေ Nozawa Onsen ဆိုတဲ့ တောင်ပေါ်နှင်းလျှောစီး စခန်းကို သွားဖို့ပါ။ တိုကျိုကနေ Nagano City ကို ကျည်ဆံရထားနဲ့ ၁ နာရီ မိနစ် ၃၀ လောက်စီး၊ Nogano Station ကနေ Togarinozawa Onsen Station လေးကို Local ရထားနဲ့ ၁ နာရီထပ်စီး၊ အဲ့ဒီကနေ Nozawa Onsen ကို Bus ထပ်စီးပြီး သကာလ ကျနော်တို့ တည်းခိုမယ့် Lodge Nogano ကို ရောက်ပါ
တယ်။ Lodge Nogano က တောင်ကုန်းပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ ဂျပန်စတိုင် အိပ်ခန်းလေးတွေရယ်၊ Hostel style Share bed rooms တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တည်းခိုခန်းလေးပါ။ Host က ဂျပန်အမျိုးသမီးနဲ့ သူ့
အမျိုးသား Australian ပါ။ အတော်လေးပျုဌာလှပြီး နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုပါတယ်။ ရောက်ပြီး အ
ထုတ်ချပြီးတာနဲ့ နှင်းလျှောစီးမယ့် ကိရိယာတွေကို ထုတ်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်နဲ့တော်မယ့် ဖိနပ်တို့၊ဘာတို့ သွားထုတ်ရတယ်။ နှင်းလျှောစီး blade မှာတက်ရတဲ့ ဖိနပ်ဟာ ကျနော့်အထင် ၅ ကီလိုလောက်လေး
မယ်ဗျာ။ အဲ့ဖိနပ်စီးပြီး လမ်းလျှောက်ရတာ အင်မတန်မှကို အခက်အခဲပါ။ Equipment တွေ ထမ်းပြီး Lodge ကို ပြန်တော့ ချထားခဲ့တဲ့ luggage တွေက အခန်းပေါ်ရောက်နှင့်နေပါပြီ။ ကျနော်တို့ အခန်းက
ဒုတိယထပ်မှာပါ။ အခန်းကနေကြည့်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကနှင်းတွေနဲ့ ဖုံလွှမ်းနေပြီးနှင်းတောင်ကုန်း တွေကိုလှန်းမြင်နေရပါတယ်။ အချိန်က မရှိတော့ အဝတ်အစားလဲ ပြီး ခုနက ကိရိယာတွေ ထမ်းလို့တောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့ cable car station ကို လမ်းလျှောက်သွားရတယ်။ station ရောက်တော့တောင်ပေါ်
တက်တဲ့ လက်မှတ်ကို ပြောင်းပြီး တဲ့နောက်ကြည့်လိုက်တော့ တောင်ပေါ်တက်တဲ့ cable car တွေက
တောင်ကုန်းအနိုမ့်အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီး ၃ station လောက်တွေ့ရတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ အမြင့်ဆုံး
တောင်ပေါ်ကို တက်တဲ့ cable car ကိုရွေးပြီး တက်သွားလိုက်တာ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာကြာစီးရပါတယ်။ တောင်ပေါ်စခန်းကို ရောက်တော့ကိုယ်က အမြင့်ဆုံးရောက်ပြီထင်တာ အဲ့ဒီကနေထပ်တက်တဲ့ တစ်ဆင့် ကျန်သေးတာတွေ့ရတယ်ဗျ။ သူများတွေ Ski စီးနေတာတွေ့တော့ အတော်လေးလွယ်တယ်တဲ့ ဟ ဆိုပြီး blade တွေ ချဖိနပ်ကို blade မှာတက်ပြီး တောင်ကုန်းပေါ်ကနေဆင်းချလိုက်တာ အဲ့လောက် အရှိန် ပြင်းလိမ့်မယ်လို့ မထင်ဖူး။ ၁၅ မီတာလောက်ဆင်းချသွားပြီးတော့ ခနတန့်သွားတာနဲ့ တုတ်ချောင်း ၂ ချောင်းနဲ့ ထောက်ပြီး ရပ်အောက်လုပ်ကြည့်တာလဲ မရ၊ ဆက်ပြီးလျှောနေတာ၊ ထောက်ထားတဲ့ တုတ်တွေ ကလဲ ကိုယ့်ဘော်ဒီဝိတ်ကို မခံနိုင်ပဲ ကွေးကုန်တယ်။ အဲ့တာနဲ့ လွှတ်လိုက်ရင်တော့ လျောကျသွားတော့မှာ၊
ပြီးတော့ တခြားလူတွေစီးနေတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက် ရင်ကိုယ်က မရှောင်တက်မတိမ်း တက်နဲ့ ဆို
တော့ ဒုက္ခတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲ ဆိုပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ခပ်မြန်မြန်တွေးလိုက်တော့ ခန္ဒာကိုယ်တစ်ခုလုံးလှဲချလိုက်ရင်တော့ ဆက်မလျှောနိုင်တော့ဖူး ဆိုပြီး ကိုယ် ကို ဘေးတိုက်လှဲချလိုက်ရပါတယ်။ လှဲချပြီး
တော့ ချက်ချင်းက ထလို့မရသေးဘူး၊ ဖိနပ်နဲ့တွဲထားတဲ့ blade တွေကို ချွတ်ရအုံးမှာလေ၊ သင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းခုလုပ်ကို တုတ်ချောင်းနဲ့ နိုပ်ပြီးဖွင့်၊ ဖိနပ်နဲ့ blade ကွဲသွားပြီဆိုမှာပဲ လူကို လှုပ်လို့ရ တော့တယ်။ အပေါ်ကို လှန်းကြည့်လိုက်တော့ ကျနော့် သူငယ်ချင်းကလဲ ဆင်းချလာတော့ မယ့်ပုံစံဖြစ်နေတော့ မဆင်းလာနဲ့လို့ အော်ပေမယ့် သူကမကြားဖူး။ ဆင်းချတာလဲ ကျနော်လဲနေတဲ့ နေရာကိုမှ တည့် တည့်။ သူလဲ ဆင်းလာပြီးတဲ့နောက် အခြေအနေ ကို သိပြီး အမြန်ရပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတာ ကျနော့် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာပဲ တန့်သွားတယ်။ ဖိနပ်နဲ့bladeကို အမြန်ချွတ်ဖို့လှန်းအော်လိုက်ရတယ်။ အဲ့တာနဲ့ ၂ ယောက်သားတောင် ကုန်းပေါ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်တက်ပြီးတောင်ကုန်းပေါ်က လွင်ပြင်လေးလိုဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးမှာ ခနနည်း
နည်းပါးပါးစီး ဓာတ်ပုံလေးပါလေးရိုက်ပြီးလက်လျှော့လိုက်ကြတော့တယ်။ တောင်ပေါ်က စားသောက်ဆိုင် မှာ နေ့လည်စာစား၊ ခနနားပြီး တောင်အောက်ကို cable နဲ့ပြန်ဆင်း၊ သူငယ်ချင်းကလဲ အဖျားတက်လာတာနဲ့ lodge ကိုပြန်ပြီး နားလိုက်ကြတော့သည်။ ညစာကို တော့ ရွာထဲ က အိမ်ဆိုင်လေးမှာ ဆာကေး
လေး သောက်ပြီး စားလိုက်တာ အတော်စားကောင်းဗျာ။ ဆိုင်ရှင်ကလဲ English လိုမတက်တော့ လာစား
နေတဲ့ တခြားဂျပန်ကောင်လေး တစ်ယောက်ကို စကားပြန်လုပ်ပြီး ဆာကေးမှာရတာ ရီနေရတယ်။
တကယ်တော့ Ski စီးကြည့်ချင်တာထက် နှင်းတွေအများကြီးဖုံးနေတဲ့၊ တလောကလုံးနှင်းတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်း
နေတဲ့ နေရာကို ရောက်ဖူးချင်တာရယ်ကြောင့် Nozawa Onsen Resort ကို လာရထားတတန်၊ ကားတ
တန်နဲ့လာခဲ့ကြာတာပါ။ အလွန်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပြီး၊ အတော်လေးသာသာယာယာ ရှိတဲ့ ရွာလေးပါ။ ကျနော်အဲ့ဒီနေရာကို နောက်တစ်ခေါက်တော့ ထပ်သွားမယ် စိတ်ကူးထား သေးတယ်။
(၄) ရက်မြောက်နေ့မှာတော့ Nozawa Onsen ကနေ ကျိုတိုမြို့တော်ကို တိုကျိုကတဆင့်သွားပါတယ်။
အလာတုံးကအတိုင်း ရထားတွေ အဆင့်ဆင့်စီး၊ တိုကျိုရောက်၊ တိုကျိုကနေ ကျည်ဆံရထားနဲ့ (၃) နာရီ
ကြာစီးပြီးတဲ့ နောက် ကျိုတိုကို ညနေ (၄)နာရီလောက်မှာ ရောက်ပါတယ်။ ဟိုတယ်က Kyoto station နားမှာကို ထုံးစံအတိုင်း မြေပုံအကြည့်မှား၊ လမ်းတွေမှားနဲ့ ဟိုတယ်ကို နောက်ကျမှရောက်တော့တယ်။ ည
ဖက်တော့ Kyoto Station ထဲက ဆိုင်တွေလိုက်ကြည့်၊ ညစာစားနဲ့ပဲ အချိန်ဖြုံးလိုက်တော့တယ်။ (၅) ရက်မြောက်နေ့မှာ Kyoto က အထင်ကရ နေရာတွေ ကို စက်ဘီးနဲ့ လျှောက်သွားမယ်လို့ တွေးထားပေမယ့် မိုးရွာနေတာကြောင့် ရထားနဲ့ပဲ သွားဖြစ်ပါတယ်။ မိုးကြောင့်သွားရလာရတာ ခရီးမတွင်ပဲ၊ ဖိနပ်ကရေဆို နဲ့ အတော်လေး ကသိကအောက်နိုင်လှတယ်။ ကျိုတိုမြို့က Arashiyama ဆိုတဲ့နေရာမှာ ရှိတဲ့ Tenryuji Temple၊ Bamboo Grove ၊ Togetsykyo Bridge တို့ကိုလမ်းလျှောက်လည်ပတ်ပြီး ကျိုတို ဘူတာကို
ပြန်လာ၊ မနက်ထဲက အပ်ထားခဲ့တဲ့ luggage တွေပြန်ထုတ်ပြီး တိုကျိုဖက်ကိုပြန်ထွက်လာပါတယ်။ တိုကျိုအဝင်မှာတော့ ရထားက ရပ်လိုက်သွားလိုက်နဲ့ တိုကျိုကို ဆိုက်ရောက်ရမယ့် အချိန် ထက်နောက်ကျနေပါ
ပြီ။ အပြင်ကိုကြည့်တော့ နှင်းက အတော်ကြီးကျနေတော့ သာမန်နှင်းကျတယ်လို့ပဲ ထင်မိတာ။ တိုကျိုဘူ
တာကြီး ကို ရောက်တဲ့ အချိန်မှာ တော့ local ရထားတွေအကုန် နှင်းမုန်တိုင်း ကြောင့် မထွက်နိုင်တော့ တဲ့အကြောင်းကြော်ငြာနေတာ ကြားရပါတယ်။ အဲ့ဒီညအတွက်တည့်မယ့်နေရာက ဘူတာနဲ့ ၂.၂ ကီလိုမီတာဝေးပါတယ်။ taxi စီးသွားမယ်ဆိုတော့ Taxi တန်းစီနေတဲ့ လူတန်းကြီးက များပြီး Taxi တစီးမှလဲ မလာပါဖူး။ အဲ့တော့ တိုကျိုဘူတာကြီးမှာ ညအိပ်မလား၊ မလာတဲ့ Taxi ပဲစောင့်မလား၊ စွန့်စားပြီးလမ်းလျှောက်ကြမလား ဆိုပြီးတွေးတော့ စွန့်စားလမ်းလျှောက်ကြမယ်ပေါ့။ ခြေထောက် ကို ရေမဆိုရအောင် ပလစ်စတစ် စွပ်၊ အပေါ်ကခြေအိတ်ထပ်ဝတ်၊ ဖိန်ပ်စီးပြီး နှင်းတောထဲမှာ iPhone ရဲ့ လမ်းညွှန်ကို အားကိုးလို့ Luggage ကိုယ်စီဆွဲပြီး နှင်းထု ၆ လက်မလောက်ရှိတဲ့ လမ်းပေါ်ကို လျှောက် ကြပါတယ်။ Luggage က ဘီးတွေက အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ နှင့်ပေါ်မှာ ဆွဲရတာ ပင်ပန်းချက်က ကမ်းကုန်။ မီတာ ၂၀၀-၃၀၀ လောက်လျှောက် လိုက်၊ အမိုးလေးရှာပြီး နားလိုက်နဲ့ လျှောက်ကြရင်း၊ Internet Wi-Fi လွှင့်ပေးနေတာ Pocket Modern က Battery ကုန်သွားပါတော့တယ်။ သိပ်မကြာဖူး၊ ကျနော့် iPhone ကလဲ Battery ရှိနေသေးပေမယ့်အ
အေးလွန်သွားတာလား၊ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အလုပ်မလုပ်တော့ ပါဖူး။ အဲ့တော့ print ထုတ်ထားတဲ့
စာရွက်မြေပုံကိုအားကိုးပြီး လျှောက်ရင်းနဲ့ လာသမျှ Taxi လဲ တားပေမယ့် ဘယ်သူမှမရပ်ပေးကြပါဖူး။
၂ ယောက်လုံးလဲ ခြေကုန်လက်ပန်းကျလို့အဆောက်အဦး တစ်ခုက အကန့်လေးတစ်ခုမှ နှင်းခိုရင်း taxi တစ်စင်းလာတာတွေ့တော့ စွန့်စားတားကြည့်တာ၊ ကံတရားမျက်နာသာပေးတာနဲ့ taxi ကရပ်ပေးပါ
တယ်။ ဒါတောင်ပေးမတက်သေးဘဲ ဘယ်သွားမှာလဲ ဆိုတာမေးနေ တော့ လိပ်စာရေးထားတဲ့ စာရွက်ကို
ပေးတော့ ကားထဲက GPS ထဲကို ရိုက်ထဲကြည့်သေးတယ်၊ ကျနော်တို့မှာတော့ လမ်းလည်ကောင် နှင်းတွေကြားထဲမှာရပ်စောင့်လို့ပေါ့။ နောက်တော့ အိုကေ ဆိုတာနဲ့ luggage ၂ လုံးအမြန်တင်ပြီး taxi ပေါ်
တက်လို့ ဘလောက်ခ်တစ်ခုလောက်ပဲ ပတ်မောင်းလိုက်ရတယ်၊ ၅ မိနစ်မကြာဖူး တည်းခိုမယ့်ဟိုတယ်ရှေ့ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ပိုက်စံ ကုန်တာအရေး မဟုတ်တော့ပါဘူး။ လုံခြုံရာ
နေရာတစ်ခု၊ နွေးနွေးထွေးထွေး နေလို့ရမယ့် နေရာရောက်ရင်ပဲ ကျေးဇူးတင်လှပါပြီ။ နှင်းမမြင်ဖူးလို့ နှင်း
တောင်အထိအတောင် ခရီးအတန်တန်ဆင့်ပြီး သွားကြည့် ရတာ။ အခုတော့ နှင်းတောထဲမှာ ဒုက္ခနဲ့တွေ့လိုက်တာ၊ နှင်းဆိုတာ မကြည့်ချင်တော့ပါဖူး၊ တော်ပါပြီ ကို ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။ (၆) ရက်မြောက်နေ့ မှာ အစီအစဉ် အရ Kamakura ကိုသွားလည်မယ် စိတ်ကူးထားပေမယ့် ရာသီဥတု ကြောင့်ရယ်၊ ရထားအချိန်
တွေ မမှန်တော့မှာကြောက်တာရယ်ကြောင့် မနက်စာစားပြီး၊ ပြင်ဆင်ပြီးတာနဲ့ တိုကျိုဘူတာကြီးကို ပဲ
ထွက်လာခဲ့တော့တယ်။ တိုကျိုဘူတာကြီးမှာ လူတွေက သာမန်ထပ်ပိုများနေတယ်လို့ ထင်ပေမယ့်၊ ဖြစ်ရိုး
ဖြစ်စဉ်ပဲလို့ ပဲတွေးလိုက်မိတယ်။ ညနေစင်္ကာပူပြန်မယ့် လေယာဉ်အချိန်က ၆ နာရီမှဆိုတော့ တိုကျိုကနေ လေဆိပ်ကို နေ့လည် ၃ နာရီမှာထွက်မယ့် Narita Express ကို reserved လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ အချိန် ရသေးတာနဲ့ Shinjuku က Tokyo Metropolitan Building ကို သွား လည်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေ ဘူတာကြီးကို ပြန်ပြီး ရထားအချိန်စောင့်နေတုံး၊ နှင်းအရမ်းကျတာကြောင့် Narita Express Delayဖြစ်မယ်ဆိုတော့ Information မှာ သွားမေးရတယ်၊ Information မှာလဲ လူတွေ အုံးအုံးကျွတ်ကျွတ်နဲ့ပါ။ Information က ရထားနောက်ကျကောင်းနောက်ကျနိုင်တယ်၊ ဒါမယ့် ရထားလာမယ်၊ ပလတ်ဖောင်းမှာ
စောင့်ပါဆိုတော့ ပလတ်ဖောင်းကို ဆင်းသွားမှာ အဲ့မှာလူတွေက ပြွတ်သိပ်နေ အောင့် စောင့်နေကြတာ
တွေ့ရတော့တယ်။ တစ်ခုခုတော့ လွဲနေပြီဆိုပြီး ကိုယ်တက်ရမယ့် ရထားတွဲ နေရာမှာတန်းစီနေတာပေါ့။
စိတ်ထဲမှာတော့ အလာမှာတုံးက အေးအေးဆေးဆေး ပဲ ဆိုတော့ ရထားပေါ် အတက်အဆင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာ ပြသနာမရှိဖူး၊ ကိုယ်တက်လို့ရမှာပဲ၊ ကိုယ့်ခုံကိုယ် ရမှာပဲ လို့ထင်မိတယ်။ ရထားလာပြီးတဲ့ နောက် ကိုယ်ထင်ထားတွေ တက်တက်ဆင်အောင်လွဲပြီး၊ ရထားပေါ်တောင် တက် လို့မရတော့အောင် ရထားပေါ်မှာ လူတွေပြည့်ကြပ်သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကျမှ သိလိုက်တာက အဲ့ဒီနေ့တစ်နေကုန် လေဆိပ်ကို ရထားတစ်စင်းမှမထွက်ပဲ၊ အခုထွက်တဲ့ ရထား ပထမဆုံးဆိုတော့ ရှေ့ပိုင်း က မသွားရသေးတဲ့ ခရီးသည်တွေ အကုန်က အခုရထားကို ရောက်လာကြတာပါ။ ကျနော်ကတော့ လေယာဉ်မမှီတော့ဖူးလို့ တွက်ထားပေမယ့် ရလိုရငြား ကြိုးစားချင်သေးတာကြောင့် ရှေ့မှာလူ ၅ ယောက် လောက်ကျန်နေပေမယ့် ဆက်စောင့်ကြည့်
နေလိုက်တယ်။ ရထားဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ဂျပန်လိုလာပြောတော့ ကိုယ့် ရှေ့ကစောင့်နေတဲ့ ၅ ယောက်လောက်က လက်လျှော့ပေးလိုက်ကြတယ်။ အဲ့တော့ ကိုယ် တွေ က ရထားအပေါ်ဝရောက်လာပြီပေါ့။
တက်လို့ကတော့ မရသေးဘူး။ ကျနော်ကြည့်လိုက်တော့ အထဲမှာ Luggage တွေကြောင့် ပြည့်နေတာဆိုတော့၊ luggage တွေကို ထပ်ပေးဖို့၊ လူတွေ နည်းနည်းနေရာပေးဖို့၊ ပူးပေါင်းကူညီဖို့ English လို့ကျနော်အော်ပြောပေမယ့် ဂျပန်တွေက English လိုနားလည်တဲ့ ပုံမပေါ်တာကြောင့် ပထမဆုံး ခရီးသည်တစ်ယောက်ရဲ့ luggage ပေါ်ကို ကျနော့် luggage တစ်ခုထပ်တင်၊ ခြေတစ်နေရာစာကို အတင်းထိုးဝင်လိုက်လို့၊
နည်းနည်းရွေ့ပေးကြပြီး၊ ကျနော်တို့ (၂) ယောက်တင်မက နောက်ထပ် လူ ၃ ယောက်လောက်ထပ်ဝင်လို့ရလိုက်ပါတယ်။ ဝင်လို့ရလိုက်တာကို ကျေးဇူးမတင်ပဲ၊ ဂျပန်အဖိုးကြီး ငမူးကြီးက ကျနော်တို့ ၂ယောက်ကို လက်မှတ်ပြခိုင်းတယ်၊ သူက လက်မှတ်ရှိလို့ အထဲဝင်ပြီး သူ့ထိုင်ခုံကို သွားမယ်တဲ့။ ကျနော် က ရှေ့မှာ လူတွေအကုန်ပိတ်နေ့တဲ့အတွက် ရွေ့လို့တောင် မရကြောင်း၊ ငါတို့မှာလဲ လက်မှတ်နဲ့ ထိုင်ခုံရှိကြောင်း
ပြောတာကို အတင်းကြီးပြောတော့၊ ကျနော်လဲ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ အော်ဟစ်ရတဲ့ အဆင့်ကို ပါရောက် လာတော့တယ်။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းကို လဲ သူ့ကို စကားပြန်ပြောနေဖို့ မလိုကြောင်း၊ သူလဲ ခရီးသည်
ကိုယ် လဲ ခရီးသည်၊ ကိုယ့်မှာလဲ လက်မှတ်ရှိနေတာ အခြေအနေက ဒီလိုဖြစ်နေတာ ဘယ်လိုမှလုပ်မရတဲ့အကြောင်း ပြောရသေးတယ်။ ရထားကထွက်ခွာချိန်ထက် နာရီဝက်လောက်နောက်ကျပြီးတဲ့ နောက် တိုကျိုဘူတာကြီးကနေထွက်ခွာနိုင်လိုက်ပါတယ်။ ၄၅ မိနစ်ကြာခရီးကို ငါးသေတ္တာလိုနေပြီး ရထားစီးလာရပေမယ့် လေယာဉ်အချိန်တော့ မှီမှာပဲ ဆိုပြီး အားတင်းလိုက်တာပြီးတဲ့ နောက် Narita လေဆိပ်ကိုရောက်တဲ့ အခါမှာ Ticket Exit လုပ်တဲ့နေရာက တန်းစီနေတဲ့ လူအုပ်ကြီးကို တဆင့်၊ လေဆိပ်အဝင် Passport Check Area ကလူအုပ်ကြီး များကို ကျော်ပြီးတဲ့နောက် ဒုက္ခတော့ ကုန်ပြီလို့ ထင်လိုက်တာ Check in Counters တွေကို တန်းစီနေတဲ့ လူတန်းကြီးတွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ မူးမေ့သွားမတက်ပါပဲ။ Narita
လေဆိပ်တစ်ခုလုံးဟာ၊ူဒုက္ခသည်စခန်းလို ဖြစ်နေပြီး အရေးပေါ်အိပ်ယာတွေ၊ စောင်တွေ၊ အရေးပေါ်စားစရာသေတ္တာပုံးခွံတွေနဲ့ ရှုပ်ရှပ်ခက်ပြီး၊ လူအများအပြားဟာ လေဆိပ်ကြမ်းပြင်တွေပေါ်မှာ အိပ်နေကြတာ၊ နားနေကြတာ တွေ့ ရပါတယ်။ ကောင်တာတစ်ခုကို တန်းစီနေပြီး နာရီတစ်ကြည့်ကြည့်နဲ့ပေါ့။ ၆နာရီခွဲ
ထွက်မဲ့ ကျနော့်လေယာဉ်အတွက် ၆ နာရီအတိမှာ ကျနော်တို့ check in ဝင်လို့ပြီးသွားပါတယ်။ Immigration၊ Security Screening တွေကို အပြေးအလွှားဖြတ်၊ ဂိတ်ကိုရောက်အောင်ပြေးပြီးလို့ ဂိတ်
ရောက်တဲ့အခါ၊ ကျနော်တို့ စီးမယ့် လေယာဉ်ဟာ ည ၇ နာရီခွဲမှ ထွက်တော့မယ့် အကြောင်း ကြော်ငြာသံကြားရတယ်။ စောစော စီးစီး ထဲက ကြော်ငြာပါလား၊ အဲ့လိုဆို မပြေးရ မလွှားရတော့ဖူးပေါ့။ ဂိတ်ရောက်
တော့မှပဲ သက်ပျင်းကြီးချပြီး နားနိုင်တော့တယ်။ Boarding ခေါ်ပြီး လေယာဉ်ပေါ်ရောက်ပြီးတာတောင်
လေယာဉ်ဟာ နောက်ဆုံး ည၈ နာရီကျော်မှထွက်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ထိုင်ခုံပေါ်ရောက်တော့ တညနေလုံးဘာမှမစားရသေးတာ ကြောင့်ဗိုက်ကအသံပေးလာပြီဆိုတော့ ဘူတာကြီးကဝယ်လာတဲ့ ပေါင်မုံတစ်ယောက် တစ်လုံး စားနေတာမြင်တဲ့ cabin crew တစ်ယောက်က ရေယူလာပေးရမလားဆိုပြီး လာမေးတော့ Delta Airlines Service ကိုရော Crew ကိုရော အတော်လေး ကျေးဇူးတင်အထင်ကြီးမိပါတယ်။
ကျနော့် ဒီခရီးကတော့ အပျော်ခရီးထက် Adventure ခရီးလို့နာမည်တက်လိုက်ချင်ပါတယ်။ ကျနော့် ရဲ့ Crisis Management Skill ဟာလဲ အတော်လေး ညံ့ဖျင်းသေးမှန်းသတိထားမိတယ်။ သင်ခန်းစာအနေနဲ့ အနေနဲ့ local news ကို သတိထားဖတ်ဖို့၊ especially အခုလို ရာသီဥတု အခြေအနေနဲ့ပတ်သတ်တာမျိုးပေါ့။ နောက်တစ်ခုက Technology ကိုပဲ အားမကိုးပဲ၊ Manual မြေပုံလေးပါလေးဆောင်ဖို့ တွေ လိုအပ်တယ် လို့ သင်ခန်းစာယူရင်း ကျနော့် ပိုစ့်ကို နိဂုံးချုပ်ပါသည်။ ။
Posted by KO at 12:24 PM 1 comment: